10 ANDRO 2018 - Fichier PDF
10 ANDRO 2018 .pdf
Nom original: 10 ANDRO 2018.pdf
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe InDesign CC 2014 (Windows) / Adobe PDF Library 11.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/01/2018 à 10:36, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 750 fois.
Taille du document: 526 Ko (64 pages).
10–20 Janoary 2018
TARI-DALANA HO AN’NYMPITARIKA
onga soa eto amin’ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka! Nanao zavamahagaga maro Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Prôgrama
Folo Andro Fiaraha-mivavaka, hatramin’ny niantombohan’izany
tamin’ny taona 2006, nisian’ny Ezaka Ranonorana Maneran-tany. Nitondra
fifohazana, fiovam-po, firehetam-po vaovao ho amin’ny asa fitoriana, ary
nanatsara ny fihavaozan’ny fifandraisana ny Fanahy Masina. Tsy isalasalana
fa ny vavaka tokoa no loharanon’ny fifohazana!
reto tari-dalana ireto dia natao mba hanampiana anao amin’ny mahampitarika anao. Ny fizaràna voalohany dia mahafaoka ireo lohahevitra
mifandray amin’ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka taona 2018; ny
toko faharoa kosa dia mampiditra ireo teboka izay hanampy anao sy ireo
ao amin’ny vondrom-bavaka misy anao. Tsarovy fa tari-dalana fotsiny ihany
ireo. Aza misalasala manisy fanovana araka izay hitarihan’ny Fanahy Masina
andritra ny 10 andro Andro Fiaraha-mivavaka, 10-20 Janoary 2018,
dia tokony hanokana fotoana, adiny iray isan’andro, hiarahana
mivavaka ny vondrona misy anao: ka na izany amin’ny alalan’ny
fihaonana mivantana, na fifampiantsoana an-tariby. Ny andro fahiraika
ambin’ny folo, ny 20 Janoary dia mitontona Sabata. Izany andro izany dia
natao ho fankalazana izay nataon’Andriamanitra rehetra ho famaliana ny
firaisam-bavaka. Ny fanirianay dia ny hahafahan’ireo hevitra sy tolo-kevitra
manampy ny tarika madinika misy anao na ireo fianakaviamben’ny fiangonana
manao fanandramana lehibe mandritra ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka.
aha hanomboka izao dia izao ianao dia manokàna fotoana
hamakiana ireo fijoroana ho vavolombelon’ireo izay efa nandray
anjara tamin’izany Folo Andro Fiaraha-mivavaka izany tamin’ny
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 2
S H A D R E C K fiangonanay ny Misiona
misy anay, rehefa tsy nanana
izany nandritra ny taona
“Misaotra indrindra! Nisy maro izahay. Miangavy
tao anareo aho hivavaka ho ahy
amin’ny Fiangonana misy sy ny fiangonana kely misy
anay, ary tsapanay fa nisy anay.”
firaisam-po teo anivon’ny
mambra izay nahitana DANNY MOONIE, DES
Hitanay BARRAS, ST. LUCIA
teo amin’ny Tempolin’ny
Lanitra i Kristy, ary ny “Nanomana fiara fitateramvavaka izay asandratray dia bahoaka ny fiangonana
mbola mitoetra eo Aminy misy anay ho an’ireo
mandrakariva. Ny firaisana mambran’ny
no tena nanamarika ny hanatrika ny Folo Andro
voarainay. F i a r a h a - m i v a v a k a .
Mbola maro ireo fijoroana Matetika ny mpamilin’ity
ho vavolombelona avy fiara ity no mitondra ireo
amin’ny isam-batan’olona mambra hanatrika ny
azoko hifampizaràna eto fivoriam-bavaka fanaonay
amin’ny fotoana manaraka.” isak’Alahady na Alarobia
alina, dia manatitra azy ireo
PAKUA, indray izy amin’ny firavan’ny
KIMBE, fotoana. Tamin’ny alina
WEST NEW BRITAIN voalohany dia nisy olona
iray nanasa ilay mpamily
hijanona hanatrika ny
ny amin’ity Prôgrama nanaiky izy! Rehefa nody
mahafinaritra ity. Voafidy izy ny alin’iny dia nitantara
ho mpiara-miasa tamin’ny ny fanandramany tamin’ny
Ministeran’ny fofombadiny ary nentaniny
Vavaka aho. Natombokay ity farany hiaraka aminy
tamin’ny Sabata fifadian- hanatrika ny fivoriamkanina ny Prôgrama, ary ny bavaka manaraka. Tonga
Alarobia no nanombohan’ nanatrika
ny Folo Andro Fiaraha- manaraka izy roa kely
mivavaka. Azo lazaina ary tsy nanapaka intsony
fa maro ny mambra isan-kariva.
nanatrika izany. Ho valin’ny fiafaran’ny Folo Andro
vavaka nasandratray dia Fiaraha-mivavaka
nanolotra Pasitora ho an’ny nozarain’izy roa tamin’ny
ny amin’ny fanirian’izy
ireo hivady tsy hoe ela
sy hanaraka ny Tompo.
Miangavy anareo izahay
hitondra azy ireo amimbavaka. Ny alina tsirairay
nandritra ny fivoriambavaka dia fitahiana avokoa.
Narahinay ny tari-dalana
natao hovakina isan-kariva,
niampy ny lohahevitra iray
fanampiny. Novakinay ireo
fizaràna avy amin’ny Soratra
tamin’ny fiainan’i Kristy,
dia ny fiaraha-misakafo
farany – ny nitsanganany
tamin’ny maty. Feno ny
Fanahy ny alina tsirairay.
Tamin’ny alina sasany dia
40 ny mpanatrika, ka ny
20 tamin’ireo dia vahiny
avy teny amin’ny fiarahamonina. Tsapanay ny
ary fantatro fa maro
ireo olona nivavaka ho
fotoana rehetra ireny.
ny Fanahiny eo amin’ny
“Tena fitahiana tokoa
ny Folo Andro Fiarahamivavaka. Nandramanay
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 3
ny firotsahan’ny Fanahy
anjara rehetra, sy teo
amin’ireo rehetra izay
nandefa antso an-tariby.
Avy tamina tanàna samihafa
ireo nandefa antso. Misaotra
tamin’ny nampiasany ho
ministera ity ho fanatrarana
fanahy maro ho amin’ny
sahiran-tsaina tokoa i Justin
raha vao miresaka momba
ny vola sy ny fianakaviany.
Taorian’ny Folo Andro
fiononana sy fiadanam-po
tanteraka izy. Tsy mbola
nanao izany fanandramana
izany velively izy teo
amin’ny fiainany. Niaiky
izy fa tena Lehibe sy Tsara
nahafinaritra SOUTH AFRICA
tokoa ny fanandramana
niainako nandritra ny Folo “Nandray anjara tsy tapaka
Andro Fiaraha-mivavaka. tamin’ny
Nivavaka aho ny mba Fiaraha-mivavaka
hanomezan’ny Tompo ahy fiangonanay, nandritra ny
ny saram-pianarako. Tapi- enina taona. Tamin’ity taona
tanteraka ity, araka ny efa fanaonay,
aho! Tsy azoko an-tsaina dia mbola tafaraka indray
velively ny mety hahazoako ny vondrom-bavaka nisy
Andriamanitra anay hanohy ny fivavahana
velona no tompointsika! sy ny fiderana, namarana ny
Roa andro tatỳ aoriana dia fotoana ary nisaraka samy
novalian’Andriamanitra namonjy ny tokantranonay
Hidera avy. Tamin’iny alina iny
a n ’ A n d r i a m a n i t r a dia naharay hafatra izahay
mandrakizay aho noho ny nilaza fa nisy naka an-keriny
fahatokiana asehony ny tany ivelan’ny tokantranony
ny iray amin’ny mambran’ny
fiangonanay, ary nentin’ireo
amin’ny tany foana izy.
Matetika no zava-doza no
“Tany amin’ny fiandohan’ fiafaran’ny toe-javatra toy
ny taona tany dia hita fa izao. Niray fo nampilefitra
ny lohaliny ny fiangonana
manontolo, ka ny vavaka
izay nasandratra dia niakatra
Voninahitra – mba tsy
hisy loza hanjo ny zanany.
Ora iray taorian’izany dia
nahazo vaovao izahay fa
navotsotr’ireo mpaka ankeriny, tsy naratra i Wesley.
Tsy manana fomba hafa
entina hanazavana izany
zava-mahagaga izany aho,
afa-tsy ny hoe naniraka ny
Azo soa aman-tsara ny
fiaran’i Wesley, ka na dia
aza ity farany dia mbola
nahery hatrany ny finoany
andro taorian’izay tranga
izay monja, izany hoe
ny Sabata dia efa afaka
nanatanteraka ny adidiny
araka ny efa nandaharana
irery ny Voninahhitra, ary
enga anie ka hampahery
ireo mpiray tampo amin’ny
finoana manerana izao
tontolo izao ity tantara ity.”
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 4
Folo Andro Fiaraha-mivavaka
Nahoana isika no mianatra ny momba ny Fitafian’ny Mpisoronabe?
Ny zavatra rehetra nataon’Andriamanitra dia misy tanjona avokoa. Misy
dikany sy antom-pisiany avokoa ny tsipiriany rehetra. Ao anatin’izany
ny momba ny Fitafian’ny Mpisoronabe. Ao amin’ny Boky Patriarka sy
Mpaminany dia izao no vakintsika “Izay rehetra mikasika ny fitafiana sy ny
toetoetry ny mpisorona, dia tokony hampifoha ao an-tsain’ny mpanatrika ny
fahamasinan’Andriamanitra sy ny toetra ambony ananan’ny fanompoampivavahana atao aminy, ary ny fahadiovana takiany amin’ireo olona miseho
eo anatrehany.” (Patriarka sy Mpaminany, t. 355). Andeha hojerentsika akaiky
ireo karazana sary famantarana hita teny amin’ny fitafian’ny Mpisoronabe,
hahafahantsika manatsoaka lesona ho antsika miaina amin’izao taonjato
fahiraika amby roapolo izao.
Ireo takelaka mirakitra ny lohahevitra natao hodinihina isan’andro
Misy takelaka mirakitra lohahevitra nomanina isan’andro mandritra ny
folo andro. Ny takila voalohany dia manome toromarika ny amin’ny fomba
fandaminana ny fotoam-bavaka; ahitana ihany koa ireo soso-kevitra antombavaka manokana sy ireo hira azo hiraina miaraka amin’izany. Ny takila
faharoa dia misy ireo fianarana fanampiny, andalanteny avy amin’ny Baiboly
sy notsongaina avy tamin’ny asasoratr’i Ellen White izay mifandray amin’ny
lohahevitra. Ny toromarika avy aminay dia ny hanaovanareo dika mitovy ireo
takelaka misy ny lohahevitra mba hahafahan’ny mpandray anjara manaraka
akaiky ny Prôgrama mandritra ny fotoam-bavaka. Azo atao tsara ny manao
dika mitovy ny tahirin-kevitra manomboka amin’ny takila voalohany
Ny fiangonana rehetra maneran-tany dia hiaraka hiombom-bavaka mahakasika
ny lohahevitra isan’andro. Hiaraka hiombom-bavaka amin’izy ireo amin’ny
alalan’ny famakiana ny Tenin’ny Soratra Masina, sy ireo andalan-teny
notsongaina, ary ireo antom-bavaka isaky ny lohahevitra. Na izany aza anefa,
aoka ianao tsy hihevitra fa voatery tsy maintsy hanaraka tanteraka ireo antombavaka naroso rehetra. Mety ho fanirianao ny hizarazara vondrona madinika,
ka hifampizara ireo antom-bavaka amin’ny vondrona tsirairay.
Ny sasany amin’ireo antom-bavaka dia misy fifandraisana amin’ny
fiangonana Advantista maneran-tany. Tena zava-dehibe tokoa ny miaramivavaka ho an’ny ankohonana misy ao amin’ny fiangonantsika. Kanefa
mety ho tianao ny hampifanaraka ny fotoam-bavakao arakaraka ny zava-misy
na hampiasa lohahevitra amin’ny ankapobeny raha misy vahiny avy amin’ny
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 5
fiarahamonina ao anatin’ny vondrona misy anao. Eto amim-bavaka ny fomba
ahafahanao mandray tsara ireo vahiny sy ahatsapan’izy ireo fa tsy olon-kafa
izy ao anatin’izany.
Ireo andalan-teny avy ao amin’ny bokin’i Ellen White, maneho ny
Misy toko sy andininy vitsivitsy avy ao amin’ny Baiboly ary andalan-teny
avy amin’ny asasoratr’i Ellen White amin’ny lohahevitra isan’andro. Ireny
dia manome fanazavana ireo singa isan-karazany hita eny amin’ny fitafian’ny
mpisorona. Manoso-kevitra izahay ny hamakianao izany miaraka amin’ny
vondrona misy anao. Azo atao amin’ny fanombohan’ny fotoam-bavaka izany,
mba hampivelarana ireo dingana ao amin’ny lohahevitra amin’io andro io, na
eny anelanelan’ny fotoam-bavaka.
Soso-kevitra ny amin’ny fomba hitsinjaràna ny fotoana
Ny fotoana laninao amin’ny fivavahana isaky ny andiam-bavaka dia mety
hiovaova, miankina amin’ny fomba fivavaky ny tsirairay. Izy ity dia sosokevitra ihany hahafahana mandrindra tsara ny fotoana:
-	Fiarahabana/Fampidirana: 2-5 minitra
-	Famakiana ny andalanteny avy amin’ny Soratra Masina sy andalanteny avy amin’ny asa soratr’i Ellen White: 3 minitra
-	Fiderana an’Andriamanitra ao anatin’ny fotoam-bavaka: 10 minitra
-	Fiaiken-keloka sy Fangatahana Hery hoenti-mandresy ny fahotana,
ao anatin’ny fotoam-bavaka: 3-5 minitra
-	Fitarainana sy Vavaka fanelanelanana ao anatin’ny fotoam-bavaka:
-	Fisaorana ao anatin’ny fotoam-bavaka: 10 minitra
Fanelanelanana atao ho an’olona fito
Toroy hevitra ny olona tsirairay hangataka amin’Andriamanitra,
hanomezany azy ireo olona fito hoentina amim-bavaka mandritra ny
10 andro fiaraha-mivavaka. Mety ho fianakaviana izany, namana,
mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, sns... Asao izy ireo hivavaka mba
hitarihan’ny Fanahy Masina ireo olona fito ireo ho eo amin’i Jesôsy.
Ny mambra ao amin’ny vondrona tsirairay koa dia tokony hangataka
amin’Andriamanitra mba hanehoany amin’izy ireo ny fomba hitondrana
ireo filàna manokana sy hanatràrana ireo olona fito voalaza tetsy ambony
mandritra ny 10 andro fiaraha-mivavaka.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 6
Ny fanompoam-pivavahana atao rehefa Sabata mandritra ny 10 andro
Aoka hisy fotoana hatokana ho an’ny vavaka sy fizaràna fanandramana
ny amin’ny valim-bavaka voaray mandritra ny fanompoam-pivavahana
amin’ireo Sabata roa. Maro ny fomba ahafahana mizara amin’ny fiangonana
izay nitranga nandritra ny fotoam-bavaka isan’andro.
Fankalazana amin’ny Sabata famaranana
Ny Sabata famaranana dia tokony ho fotoam-pifaliana lehibe noho ireo
zavatra nataon’Andriamanitra nandritra ny 10 andro fiaraha-mivavaka. Aoka
halalaka tsara ny fotoana hizaràna fanandramana mahakasika ireo valimbavaka voaray, fampianarana/fitoriana ara-Baiboly mahakasika ny vavaka,
ary ny fiderana. Tariho ho amin’ny fotoam-bavaka manokana ny mpivory
rehetra mba hahafahan’ireo izay tsy nanana tombontsoa nanatrika fiarahamivavaka isan’andro manandrana ny fiaraha-mivavaka amin’ny hafa. Jereo
ao amin’ny Andro faha-11 ireo fitaovana, mba hahafahana manana hevitra
Ny fitohizan’ny 10 andro fiaraha-mivavaka 2018
Mivavaha misimisy kokoa ho amin’izay sitrapon’Andriamanitra ho an’ny
Fiangonana/vondrona ho fanohizana izay efa natombony nandritra ny 10
andro fiaraha-mivavaka 2018. Mety hanohy izany amin’ny fiaraha-mivavaka
isan-kerinandro ianao. Na mety hilaina koa ny hanombohana ministera
vaovao ao amin’ny fiangonana na asa fitoriana eo amin’ny fiaraha-monina
misy anao. Aoka hivelatra ary araho izay hitondran’Andriamanitra anao. Ho
hitanao fa tsy ho lany zava-mahagaga ny dianao arakaraka ny androsoanao
Miangavy aho ny hifampizaranao ny tantaran’ny fomba fiasan’
Andriamanitra tamin’ny alalan’ny folo andro fiaraha-mivavaka. Ny
tantara hoentinao dia ho fampaherezana ho an’ny hafa. Ny fijoroana
ho vavolombelona dia azo alefa amin’izao adiresy izao stories@
ministerialassociation.org na midira amin’ny www.tendaysofprayer.org.
Rehefa misy olona iray mangataka amin’Andriamanitra, dia aoka ho azonao
antoka tsara fa misy hafa ihany koa mitondra izany antom-bavaka izany –
Mahery indrindra izany! Aoka ianao tsy hihevitra fa rehefa misy antombavaka entin’olona iray dia tsy tokony hisy olon-kafa hitondra izany intsony.
“Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’
ny tany na amin’ inona na amin’ inona ka hangataka izany, dia ho azony
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 7
avy amin’ ny Raiko Izay any an-danitra izany.” (Mat. 18:19). Moa va tsy
mampahery loatra izany misandratra amin’ny alalan’ny vavaka izany?
Mitaky ireo Teny Fikasan’Andriamanitra
Nanomana tahirin-kevitra izahay izay mirakitra karazana teny fikasana azo
takina ao anatin’ny vavaka. Entano ny vondrona hitaky ny teny fikasana avy
amin’Andriamanitra rehefa mivavaka. Mora ny mifantoka amin’ny olana
ananantsika. Fa rehefa mitaky ny Teny Fikasana avy amin’Andriamanitra
isika dia mitombo ny finoantsika ary hotsaroantsika fa tsy misy zavatra izay
tsy hain’Andriamanitra atao. Ny teny fikasana dia manampy antsika tsy ho
variana amin’ny olana sy ny fahasahiranantsika, fa hibanjina an’i Jesôsy. Ny
Baiboly dia mirakitra teny fikasana maro azo takina ao anatin’ny fahalemena
sy ny tebiteby atrehana. Entano ny olona hitady teny fikasana hafa ao anaty
Baiboly ary handrakitra izany an-tsoratra, mba hahafahany mitaky izany
“Tokony hamboraka ny filantsika amin’ny Tompo amin’ny fo feno
fahatsorana isika, ary hangataka ny teny fikasany amim-pinoana sy amimpahatokiana, mba ho fantatry ny mpivory fa nianatra ny handresy miaraka
amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka isika. Hahazo toky izy ireo
fa manatrika ny fivoriana ny Tompo, ary hanokatra ny fony handray ny
haben’ny fahasoavany izy. Hitombo ny finoan’ny mpivory ny fahatsoranao,
ary ho vonona izy ireo handray ny toromarika rehetra avy aminao mpitarika”
(Evangelism, p. 146).
“Manana fitahiana be dia be ho an’ireo izay hiara-miasa amin’Andriamanitra
ny lanitra. Izay rehetra mankatò Azy dia mahazo mitaky amim-pahatokiana
ny fanatanterahana ireo teny fikasany ireo. Nefa tokony hampiseho fitokisana
tanteraka sy tsy azo hozongozonina amin’Andriamanitra isika. Matetika no
miandry Izy vao mamaly antsika mba hizahany ny finoantsika na hitsapany
ny tena maha-izy ny faniriantsika. Rehefa nangataka araka ny Teniny isika,
dia tokony hino ny teny fikasany sy hivavaka lalandava amim-paharetana.”
(Henoinareo ny Fanoharana, p. 118).
Asao ireo rehetra niaraka taminao, nanatrika ny folo andro fiaraha-mivavaka
mba hanao fifadian-kanina amin’ny endriny hafa, toy ny fifadiana fahitalavitra,
ny hiran’izao tontolo izao, ny sarimihetsika, ny aterineto, ny zava-mamy,
na sakafo hafa izay saro-devonina. Ampiasao ho amin’ny fivavahana sy ny
fianarana Baiboly ny fotoana ivelan’ny asa aman-draharaha, hangatahana
amin’Andriamanitra mba hanampiany anao sy ny fiangonanao mba hanana
firaisana misimisy kokoa amin’i Kristy. Ny fanarahana fomba fisakafo tsotra
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 8
dia hahatonga ny mpandray anjara ho mora mandray kokoa ny feon’ny
Angataho ny Fanahy Masina mba hanehoany aminao ny fomba fivavaka sy
izay tokony hangatahana ho an’ilay olona entina amim-bavaka na amin’ny
toe-javatra manokana. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa tsy mahafantatra
izay tokony hangatahina isika, ka noho izany dia ny Fanahy Masina ihany no
afaka manao fanelanelanana ho antsika.
“Tsy hoe tsy maintsy mivavaka fotsiny amin’ny anaran’i Kristy isika, fa
amin’ny fibitsihan’ny Fanahy Masina koa. Izany dia manazava ny dikan’izay
voalaza hoe: “Ny fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina.”
(Rômanina 8:26) Mahafaly an’Andriamanitra ny mamaly fivavahana toy
izany. Rehefa manonona vavaka amin’ny anaran’i Kristy amin-kafanampo sy amin-kery isika, dia ao amin’io hery io indrindra no misy antoka avy
amin’Andriamanitra fa hamaly ny fivavahantsika Izy, “mihoatra lavitra noho
izay angatahintsika na heverintsika.”
Rehefa manomboka ny fiaraha-mivavaka ianao dia asao hanatona avokoa
ny mpivory. Rehefa tafangona ny rehetra dia manaova faribolana. Aoka
hifanetiety tsara mba hahafahana manome lanja ny firaisana, izay tena zavadehibe tokoa amin’ny fiaraha-mivavaka. Raha miparitaka manerana ny
efitrano ny olona dia hampanano sarotra ny fahenoana ny hafa izany.
Fomba tsara ahafahana mitahiry ao am-po ny lohahevitra, manao fanekena
amin’Andriamanitra ary mahatsapa ireo fitahiany ny fampiasana bokimbavaka. Ny firaketana an-tsoratra ny vavaka asandratsika sy ny fitehirizana
ireo valim-bavaka voaray dia porofo tena mampahery tokoa.
Raha sitrakao, ny fampiasana ny bokim-bavaka dia azo ampidirina tsara
amin’ny Prôgraman’ny folo andro fiaraha-mivavaka, araka izay itiavana
azy. Azonao atao ny manokana fotoana mandritra ny fivoriam-bavaka mba
hanoratan’ny mpanatrika ao amin’ny bokiny manokana ireo valim-bavaka
voarainy tamin’Andriamanitra. Na koa, avondronao anaty firaketana toy
ny karine, na taratasy lehibe na aterineto ireo antom-bavaka sy valimbavaka voaray. Fomba tsotra ahafahana manao izany ny fanaovana tsipika
mijidina, mampizara ho roa ny taratasy. Soraty erỳ amin’ny ilany ankavia
ny antom-bavaka ary erỳ amin’ny ilany ankavanana kosa ny valim-bavaka.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 9
Mampientanentana sy mampitombo ny finoana ny famerenana ireny sy ny
fahitana ny fomba namalian’Andriamanitra ny vavaka!
Entano, ary manomeza ohatra ny amin’ny fomba fanehoana fanajana.
Manakaiky ny Seza fiandrianan’ny Mpanjakan’izao tontolo izao isika. Aoka
tsy haneho tsy fitandremana amin’ny fihetsika sy ny fomba fanao. Na izany
aza, tsy voatery handohalika mandrakariva. Fanirianao ny hampahazo aina
tsara ny olona mandritra ny adiny iray, noho izany, entano izy ireo handohalika
na hipetraka na hitsangana araka izay itarihan’Andriamanitra azy sy izay
Fehezanteny ao anatin’ny vavaka
Ny vavaka dia tokony ho fohy ary tsy miolakolaka. Izany dia ahafahana
manome tombontsoa ny hafa mba hivavaka ihany koa. Ezaho hafohezina
amin’ny alalan’ny fehezanteny vitsy foana ny vavakao. Afaka mivavaka
imbetsaka ny tsirairay. Ny vavaka fohy dia mahatonga ny fotoana hahaliana
mandrakariva ary mamela ny Fanahy Masina haneho amin’ny vondrona ny
tena fomba fivavaka. Tsy ilaina ny manokatra sy mamarana ny fehezanteny
tsirairay amin’ny “Andriamanitra ô!” sy ny “Amena”. Resaka mitohy
ifanaovana amin’Andriamanitra no atao amin’izany fotoana izany.
Na dia mpitarika aza ianao dia aza anjakanao loatra ny fotoam-bavaka.
Ny tanjona dia ny hampandraisana anjara ny rehetra. Anisan’ny fotoana
mahafinaritra tokoa ny fotoanan’ny fahanginana, satria izany dia manome
fotoana ahafahan’Andriamanitra miteny ao am-pontsika. Avelao ny Fanahy
Masina hiasa, ary omeo fotoana hivavahana ny tsirairay.
Ny hira fiderana tsy nilàna fanomanana mialoha, eny anelanelan ‘ny vavaka,
dia manampy amin’ny fanomezana endrika tsara ny fivoriam-bavaka. Ny hira
tsy maintsy hiraina ankoatra izay dia milahatra amin’ny fiafaran’ny lohahevitra
tsirairay. Aoka tsy hihevitra fa tsy maintsy hiraina avokoa ny hira voalahatra
mialoha rehetra - soso-kevitra ihany ireo. Ny fiderana dia anisan’ny fomba
tsara hialana amin’ny fizaram-bavaka iray ho amin’ny iray hafa.
Mandray ireo antom-bavaka
Aoka tsy hanontany antom-bavaka avy amin’ny vondrona. Fa, ilazao kosa ny
mpanatrika mba hivavaka ho an’ny antom-bavak’izy ireo ary entano ny hafa,
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 10
raha azo atao, hanatona azy ireo ary hiara-mitondra ny antom-bavaka. Izao
no antony: Fotoana! Ny firesahana momba ny antom-bavaka dia hihazona ny
ankamaroan’ny fotoana. Faly i Satana raha afaka mihazona antsika hiresaka
mahakasika ilay olana fa tsy mivavaka momba ilay olana. Ireo mpikambana
ao anatin’ny vondrona dia matetika no manomboka amin’ny fanomezana
torohevitra sy fanolorana vahaolana. Ny hery dia avy amin’Andriamanitra!
Arakaraka ny hivavahantsika no hampitombo ny Heriny.
Ny fotoananao isan’andro
Ity no tena zava-dehibe indrindra. Aoka ho azonao antoka fa amin’ny mahampitarika anao dia manokana fotoana hipetrahana eo an-tongotr’i Jesôsy
isan’andro ianao, amin’ny firesahana Aminy sy famakiana ny Teniny.
Raha ny fahafantarana an’i Jehôvah no ataonao laharam-pahamehana amin’ny
fiainanao dia hanokatra fanandramana mahafinaritra ho anao izany. “Avy tao
amin’ny toeram-pivavahana mangina no niavian’ny hery izay nanozongozona
izao tontolo izao tamin’ny andron’ny Refôrmasiona lehibe. Tamin’ireny toerana
ireny no nametrahan’ireo mpanompon’i Jehôvah ny tongony tambonin’ny
vatolampin’ny teny fikasany.” (Hery Mifanandrina, t. 214)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 11
ANDRO VOALOHANY – ILAY DILOILO FANOSORANA
“Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina.
Tahaka ny diloilo tsara amin’ ny loha, izay mitsororoka amin’ ny somotra,
dia ny somotr’ i Arona, izay mitsororoka amin’ ny moron-tongotr’ akanjony.”
(SALAMO 133:1, 2)
TORO-MARIKA HO FANATANTERAHANA NY FOTOAM-BAVAKA
•	Tompo ô! Midera Anao izahay noho ny fampanantenana ny Fanahy
Masinao. Midera Anao izahay noho ny nanomezanao ny Fanahy Masinao
ho an’izay mangataka izany.
•	Misaotra Tompo ô, satria ny Fanahy Masinao dia afaka mitondra
fampiraisana eo anivon’ny mambran’ny fiangonana
Fiaiken-keloka sy fangatahana fandresena ny ota
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, asehoy anay ny ota izay tokony
hibebahanay ao am-ponay. Mangataka Aminao, omeo anay ny fandresena
ireny ota ireny.
•	Mamelà anay tamin’ny tsy nanokafanay manontolo ny fonay hiasan’ny
•	Mamelà anay tamin’ny tsy nanekenay mandrakariva hiara-miaina sy hiaramiasa amim-pirahalahiana ho an’ny hafa.
Fitalahoana sy Fanelanelanana
•	Ray ô ! Manampia anay hahita ny filànay ny Fanahy Masina. Enga anie
izany hitarika anay ho amin’ny Fahamarinana rehetra. (Jaona 16:13).
•	Manampia anay hanana fo tsotra “Miezaha mitady fihavanana amin’ ny
olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy
hahita ny Tompo.” (Hebreo 12:14)
•	Miangavy Anao izahay, omeo anay ny Fanahy Masina hampianatra anay
ny zavatra rehetra ary hampahatsiaro anay izay rehetra nolazainao taminay.
•	Tompo ô! Ny Fanahy Masinao anie hamonjy anay amin’ny fahalemenay,
ka hampahafantatra anay izay vavaka tokony hataonay. (Rômanina 8:26).
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 12
•	Tompo ô ! Ampio ny fiangonanao hanandratra an’i Kristy : Izy ilay
nohomboana tamin’ny Hazo Fijaliana ary mbola hiverina indray. Manomeza
anay ny fo mangoraka ireo fanahy very.
•	Miangavy Anao izahay, tahio ny asa fitoriana manerana ny vohon-tany,
mandritra ity taona ity. Mangataka manokana ho an’ny Ezaka fitoriana “Ny
Mambra Rehetra Mandray Anjara” any Japana sy Zambia, ary Filipinina
•	Mivavaka izahay ho an’ny fifohazana ara-panahin’ireo tanora Advantista
mitandrina ny andro fahafito izay mianatra eny anivon’ireo sekoly sy
anjerimanontolo manerana izao tontolo izao. Maniry izahay ny mba
hahatonga azy ireo ho Ambasadaoro mavitrika ho an’i Kristy.
•	Tompo ô ! miangavy anao izahay, tahio ny asan’ny Iraka Maneran-tany.
Omeo fahendrena ireo mpiasanao amin’ny ezaka ho fandrindrana ny
“fananganana Fiangonana” eto amin’izao tontolo izao sy ny fitadiavambola handefasana ireo mpamaky lay any amin’ireo faritra tsy mbola tafiditry
ny hafatry ny filazantsara.
•	Tahio ireo mambra mahatoky ao amin’ny fiangonana izay manohana ny
asanao, na kely na be ny fanomezana omeny. Miangavy Anao izahay, aoka
ny Fanahy Masinao hitari-dalana anay hanome amin’ny fo ary handray ireo
fitahiana rehetra avy amin’ny fitantanana mahatoky.
•	Miangavy anao izahay, tahio ny ezaka rehetra izay ataon’ny Sampana
Aumônerie amin’ny fampitaovana ireo mpitondra fivavahana eny
anivon’ireo toby maro samy hafa, sy ny fandavan-tena ananan’izy ireo
hiasa eny anivon’ny fonja, eny amin’ireny trano fitsaboana ireny, ary eny
amin’ny toby miaramila ary ny maro samy hafa.
•	Tompo ô ! Mangataka ihany koa izahay ho an’ireo olona fito (na mihoatra)
izay ao anaty lisitra manokana eto am-pelatananay. Ampio izy ireo hamela
ny Fanahy Masina hiasa eo amin’ny fiainany.
•	Mangataka ihany koa izahay ho an’ny filàn’ny tsirairay izay manatrika izao
•	Misaotra Andriamanitra ô, tamin’ny nanomezanao ireo teny fikasana maro
dia maro mahakasika ny Fanahy Masina.
•	Misaotra ny amin’ny Teny Fikasanao, ao amin’ny Lioka 11:13: “Koa raha
hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ ny zanakareo,
tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina
ho an’ izay mangataka aminy?”
•	Misaotra ny amin’ny Fanahy Masinao izay mitarika anay ho amin’ny
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 13
ILAY DILOILO FANOSORANA
ndrey, tsara sady mahafinaritra Raha ny mpirahalahy no miaramonina. Tahaka ny diloilo tsara amin’ ny loha, Izay mitsororoka
amin’ ny somotra, dia ny somotr’ i Arona, Izay mitsororoka amin’
ny moron-tongotr’ akanjony.” (SALAMO 133:1, 2)
y diloilo izay nanosorana ny mpisorona dia maneho ny Fanahy
Masina. Ilaintsika ny Fanahy Masina, Ilay hany tokana afaka
hitondra fampiraisana ao amin’ny fiangonantsika, mba
hampahomby antsika amin’ny iraka nampanaovina antsika.
sy maintsy miafina ao amin’i Kristy ny fiainantsika. Tsy maintsy
manana fahalalana manokana an’i Kristy isika. Amin’izay isika
vao afaka haneho marina Azy eo amin’izao tontolo izao. Na aiza
na aiza misy antsika, dia tsy maintsy avelantsika hazava tsara eo anoloan’ny
Voninahitr’Andriamanitra ny jirontsika amin’ny alalan’ny asa tsara izay
ataontsika. Izany no asa lehibe sy manan-danja amin’ny fiainantsika. Ireo
izay tena eo ambanin’ny hery miasa manginan’ny Fanahy Masina dia haneho
ny heriny amin’ny fampiharana tsotra ny foto-kevitra mandrakizain’ny
Fahamarinana. Hasehon’izy ireo fa ny diloilo masina dia hitsotsorika avy
amin’ireo sampan’ôliva roa ao amin’ny efitry ny tempolin’ny Fanahy. Ny
tenin’izy ireo dia hofenoina ny herin’ny Fanahy Masina mba hanalefaka sy
hampilefitra ny fo. Hiseho miharihary fa ny teny izay hambara dia fanahy sy
fiainana. (Reflecting Christ, p. 130)
zy, izay mahatsapa ny fahalemeny, nitolona tamin’Andriamanitra tahaka
an’i Jakôba, sy ity mpanompo fahizay, niantso mafy nanao hoe : “Tsy
havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho.,” no handeha miaraka
amin’ny hosotra mamelombelon’ny Fanahy Masina. Ny tsio-drivotry ny
lanitra no handrakotra azy. Hitondra hery lehibe ho an’ny fivavahana amin’i
Kristy ny hery miasa mangina avy aminy. . .” (Medical Ministry, p. 203)
a raha tonga ny Fanahin’ ny fahamarinana, dia Izy no hitaridalana anareo ho amin’ ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy
Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy
aza dia hambarany aminareo.” (Jaona 16:13)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 14
nga anie ka hitombo amin’ny fahalalana ny fahamarinana isika,
hanome Azy ny fiderana sy voninahitra rehetra; Izy Ilay iray
amin’ny Ray. Enga anie ka hanao izay azontsika atao rehetra isika
hikatsaka ny hosotry ny lanitra, dia ny Fanahy Masina izany. Enga anie ka
ho madio, hitombo amin’ny fiainana kristianina isika, ka rehefa tonga eo
amin’ny fitsaràn’ny lanitra isika dia ho voaantso tsy manan-tsiny ao amin’i
Kristy.” (Reflecting Christ, p. 219)
sy maintsy misy fifanakalozana tsy miato avy amin’ny fandraisana
sy fanomezana; fandraisana sy fizaràna. Izany no mampiray
antsika, amin’ny maha-mpiasan’Andriamanitra antsika. Izany no
asa mandritra ny fiainana ho an’ny Kristianina. Fa izay mamery ny ainy dia
itombo ny fahafahana mandray ny diloilon’ny Fanahy avy amin’ireo
hazon’ôliva roa rehefa navoakan’ny mpandray azy avy ao aminy
manontolo izany diloilo masina izany tamin’ny alalan’ny fiteny sy
ny asa, mba hanomezany izay ilain’ny hafa. Asa sarobidy, asa mahafa-po –
mandray sy mizara tsy miato.
sy maintsy manana vatsy mamelombelona isan’andro isika. Mety ho
firy ny Fanahy azontsika ampiana amin’ny alalan’ny fifaneraserana
amin’izy ireny ! Ny lanitra manontolo dia miandry ireo fantsona
ahafahana mandraraka ny diloilon’ny Fanahy Masina, mba hitondra fifaliana
sy fitahiana ho an’ny hafa. Inoako fa tsy hisy hanao tsirambina ny asany
raha ho tonga iray amin’i Kristy izy ireo. Rehefa mitoetra amintsika Izy, dia
tsy maintsy hiasa mafy sy mitohy isika, mba hampitoetra ny asantsika. Ny
fahafenoan’Andriamanitra no hirotsaka eo amin’ny mpiasa voatokana mba
hahafahany mizara amin’ny hafa. (Testimonies for the Church, vol. 6, pp.
ehefa mifehy ny sain’ny mambra ny Fanahy Masina, dia hisy
tombam-bidiny kokoa ny fomba fiteny, ny asa, ny ara-panahy,
mihoatra noho ny tamin’ny lasa. Ny mambran’ny fiangonana dia
handray famelombelomana avy amin’ny rano velona, ary ny mpiasa, izay
miasa eo ambanin’ny fitarihan’ny loha iray, dia i Kristy, dia hanambara ny
Tompony amin’ny Fanahy, amin’ny teny, amin’ny asa, ary hifampahery mba
handroso amin-kery lehibe, hiara-miasa akaiky amin’izay efa nanolorantsika
tena. Hitombo ny firaisana sy ny fifankatiavana, izay ho vavolombelona eto
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 15
amin’izao tontolo izao fa Andriamanitra efa naniraka ny Zanany mba ho faty
ho fanavotana ny mpanota. Hisandratra ny fahamarinan’Andriamanitra, ary
arakaraka ny mampahazava ny jiro, no hahatakarantsika azy bebe kokoa
hatrany. (Counsels for the Church, p. 100)
anakaiky ny faran’ny tantaran’ny tany isika, ary Andriamanitra
dia miantso ny rehetra hanandratra ny faneva mitondra ny soratra
hoe: «Indreto ireo izay mitandrina ny Didin’Andriamanitra sy
ny finoana an’i Jesôsy.» Miantso ny vahoakany Izy mba hiara-miasa amimpirindrana tanteraka. Miantso ireo izay nanolo-tena hiasa eo amin’ny sehatry
ny fitsaboana Izy mba hiara-miasa amin’ny Pasitora; miantso ny Pasitora
Izy hifanome tanana amin’ireo Misiônera eo amin’ny sehatry ny fitsaboana;
miantso ny fiangonana koa Izy handray ny andraikitra voatendry ho azy
ireo, dia ny fihazonana ny fenitry ny tena fanavaozana marina ao amin’ny
faritra voatokana ho azy, mamela ireo mpiasa voaofana sy za-draharaha
hiditra amin’ny sehatra vaovao. Tsy misy teny fanakiviana tokony hatao
satria mampalahelo ny fon’i Kristy izany ary mahafaly ny fahavalo. Mila
hatao batisan’ny Fanahy Masina avokoa ny rehetra. Ny rehetra dia tsy tokony
hanilika sy hanaparitaka teny fanalam-baraka, fa hanakaiky an’i Kristy, mba
hahazoan’izy ireo mankasitraka ireo andraikitra mankadiry izay sahanin’ny
mpiara-miasa aminy. «Miara-mientana, miara-mientana !”, izany no tenin’Ilay
Mpampianatra Masina amintsika. Ny firaisana no hery; Ny fisarahana dia
fahalemena sy faharesena.(Counsels on Health, pp. 517, 518)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 16
ANDRO FAHAROA – HAMASININA HO AN’NY TOMPO
Ary aoka ho masina ho Ahy hianareo, satria masina Aho Jehovah; ary efa
navahako tamin’ ny firenena samy hafa hianareo mba ho Ahy. (LEVITIKOSY
SOSO-KEVITRA FANDRINDRANA NY FOTOAM-BAVAKA
•	Tompo ô, midera Anao izahay satria Andriamanitra Mahery Ianao, Hendry,
be famindrampo ary be fitiavana
•	Midera Anao izahay satria miantso anay tsirairay avy mba ho masina Ianao.
•	Midera Anao izahay satria manana ny hery entina manamasina anay Ianao.
Fiaiken-keloka sy fangatahana hery hoenti-mandresy ny fahotana
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, asehoy anay ireo fahotana tokony
hibebahanay ampahibemaso ary ireo izay tokony hibebahanay manokana.
Mangataka ny herinao izahay hoenti-mandresy ireo fahotana ireo.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra izay niezahanay niady tamin’ny
fahotana tamin’ny herinay manokana.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra tsy nahombiazan’ny fanehoanay ny
toetranao amin’ny hafa. Enga anie ny fiainanay haneho mandrakariva fa
voatokana ho Anao ary Anao izahay.
Fangatahana sy Fanelanelanana
•	Ray ô, miangavy Anao izahay, asehoy anay ny hevitry ny hoe “masina”.
Ampahafantaro anay ny fahamasinanao.
•	Asehoy anay izay tokony hataonay hanananay “fahamasinana” fa izay “tsy
manana fahamasinana dia tsy hahita ny Tompo» (Hebreo 12:14).
•	Tompo ô, “aoka harovana avokoa ny fanahinay sy ny ainay ary ny tenanay,
ka ho tanteraka tsy hanan-tsiny amin’ny fiavian’i Jesosy Kristy Tomponay.”
(1 Tesalônianina 5:23).
•	Miangavy Anao izahay, “amorony fo madio izahay.” (Salamo 51:10).
•	MiangavyAnao izahay, asehoy anay ny fomba hankalazana an’Andriamanitra
amin’ny tenanay. (1 Kôrintianina 6:20).
•	Mitahia ny sampan-draharaha ADRA amin’ny asa sahanin’izy ireo
amin’ireo mahantra sy tsy misy mpiahy eny anivon’ny fiarahamonina.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 17
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, hamafiso ny finoanay ary tariho izahay
hahafoy fotoana misismisy kokoa amin’ny fianarana Baiboly sy ny
fivavahana. Mamelà anay hiara-mandeha Aminao isan’andro toa an’i
•	Miangavy Anao izahay, atodiho amin’ireo soatoavina mandrakizay ny
fonay, fa tsy ireo fialam-bolin’ity izao tontolo izao ity. Arovy amin’ny
fitaoman’izao fiainana izao izay manimba ny fanandramana ara-panahinay
•	Ray ô, aoka ny sitraponao ho tanteraka eo amin’ny fiainanay sy ao ampiangonanay, fa tsy ny anay. Mampianara anay hanana fanetren-tena, ho
mora atoro, ary ho vonona hanaiky ny drafitrao.
•	Miangavy Anao, tariho izahay hanombo ny tenanay ary hiaina amin’ny
herin’i Jesôsy. Mangataka manokana ny hitarihanao ny tanoranay,
ny hanampianao azy ireo hanokana ny fiainany manontolo amin’ny
•	Mivavaka ho an’ireo olona fito (na mihoatra) izay ao anatin’ny lisitra
eto am-pelatananay izahay. Enga anie izy ireo hanokatra ny fony mba
hahafahanao manamasina azy ireo.
•	Mivavaka ihany koa izahay ho an’ny filàn’ny tenanay izay tafavory etoana.
•	Tompo ô, misaotra Anao izahay fa voasasa sy nohamasinina ary
nohamarinina tamin’ny «anaran’i Jesosy Tompo sy tamin’ny
Fanahin’Andriamanitsika» (1 Kôrintianina 6:11).
•	Misaotra Anao noho ny nanomezanao anay fo vaovao (Ezekiela 36:26).
•	Misaotra Anao fa nohamasinin’ny Teninao izahay (Jaona 17:17).
HAMASININA HO AN’I JEHOVAH
ry aoka ho masina ho Ahy hianareo, satria masina Aho
Jehovah; ary efa navahako tamin’ ny firenena samy hafa
hianareo mba ho Ahy.” (LEVITIKOSY 20:26)
AMASININA HO AN’NY TOMPO”, izany no hita eo
amin’ny hamama eny amin’ny lohan’ny Mpisoronabe. Ny
Tompo dia miantso antsika, toy ny niantsoany ny mpisorona
fahiny, mba hanana fiainana miavaka sy masina. Ny fiainantsika dia
fijoroana ho vavolombelona ho Azy.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 18
ia namaly Jehovah ka nilaza tamin’ izay nitsangana teo
anoloany hoe: Esory aminy ny fitafiana maloto. Ary hoy koa Izy
taminy: Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko
akanjo fihaingoana hianao. Dia hoy izaho: Aoka hasiany hamama madio eo
an-dohany. Ka dia nasiany hamama madio teo an-dohany, sady nampitafiny
izy; ary Ilay Anjelin’ i Jehovah dia nitsangana teo.” (Zakaria 3:4, 5)
sy mandà ny fanamelohana ny amin’ny tsy fahamendrehan’i Josoa
ny Tompo, fa nasehony kosa fa efa novidiny izy. Nampiakanjoany
azy ny Akanjom-pahamarinany, tsy mametraka ireo fitafiana ireo
teo ambonin’ny fitafiana maloto vokatry ny tsy fankatoavana sy ny fandikandalàna Izy, fa izao no nolazainy voalohany : “Esory aminy ny fitafiana maloto.
Ary hoy koa Izy taminy: Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko
akanjo fihaingoana hianao. Dia hoy izaho: Aoka hasiany hamama madio
eo an-dohany. Ka dia nasiany hamama madio teo an-dohany”, ary nasiana
soratra hoe “Hamasinina ho an’ny Tompo”. (Manuscript Releases, vol. 20,
pp. 190, 191)
y kristianina dia tokony hijoro ho solontenan’ny foto-kevitry ny
lanitra. Izy dia voafatotry ny adidy masina haneho ny fahamarinana
amin’ny hatsaran-toetrany sy ny hatsaram-panahiny. Ny fahalemempanahy sy ny fahatsaram-panahy ary ny fahamarinan-toetra hentitra dia tokony
hanamarika ny teniny sy ny fihetsiny. Nohamasinina ho an’Andriamanitra,
voatokana ho amin’ny fanompoana Azy, hanaja mandrakariva ny finoany izy.
Tsy misy kofehin’ny fitiavan-tena mifamatotra amin’ny toetrany. Isika dia
tokony hampianatra ny tenantsika haneho ny Fanahin’Andriamanitra amin’ny
fiainantsika manontolo. Ny Fanahin’Andriamanitra dia tsy hamitaka velively
ny lalan’ny zanak’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny hery entin’ny Fanahy
Masina, dia afaka manaisotra ireo zavatra rehetra mampiahiahy amin’ny
fiainantsika isika. Raha tsy maintsy mivoaka avy ao amin’ny haizina izay
mahatonga ny tsy finoana hameno ny fanahy isika, ka hametraka ny tenantsika
ho eo amin’ny fiposahan’ny hazavana mazava avy amin’ny fahazavan’ny
tenin’Andriamanitra, dia handray fitahiana amin’ny lalana mankany amin’ny
fahamasinana.. . . (This Day with God, p. 281)
ndriamanitra dia nisafidy ny olombelona mba ho masina
mandrakizay. «Izao no sitrapon’Andriamanitra momba anao, dia
ny mba hahamasina anao.” Tonga amintsika ny antsony, manao
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 19
hoe : « Masina, Masina mandrakariva », ary izao no tena tokony hamaliantsika
izany mandrakariva : “Eny, Tompo, Masina mandrakariva.”
sy misy olona mahazo fanamasinana noho ny fizokiana,
na mandray izany avy amin’ny hafa. Ny fanamasinana dia
fanomezana avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy.
Ireo izay mandray ny Mpamonjy dia tonga zanak’Andriamanitra. Izy ireo no
zanany ara-panahy, nateraka indray, nohavaozina tamin’ny fahamarinana sy
ny tena fahamasinana. Niova ny fisainan’izy ireo. Nanana fahitana mazava
kokoa nahafahany nibanjina ny tena zava-misy marina izy. Noraisina ho
anisan’ny ankohonan’Andriamanitra izy ary tonga nanam-pitoviana Taminy,
niova tamin’ny alalan’ny Fanahiny, avy amin’ny voninahitra ho amin’ny
voninahitra. Nolaviny ny tenany, ka tonga mankamamy ny fitiavana fara
tampony ho an’Andriamanitra sy ho an’i Kristy izy ireo. (Signs of the Times,
Dec. 17, 1902)
y Mpamonjy antsika dia Mpamonjy tsy mikatsaka afa-tsy izay
mahasoa ny maha-olona manontolo. Izy dia tsy Andriamanitra
amin’ny ampahany ihany. Ny fahasoavan’i Kristy dia miasa ho
amin’ny fifehezana ny vatan’olombelona manontolo. Izy no namorona ny
zavatra rehetra. Izy no nanavotra ny olon-drehetra. Izy no nanome ny saina,
ny hery, ny vatana ary ny fanahy. Mpiombona amin’ny toetran’Andriamanitra
Izy, ary ny rehetra dia fanaka voafidiny. Tsy maintsy tompoina amin’ny saina,
fo, fanahy ary ny hery manontolo izy. Amin’izany no hankalazàna ny Tompo
eo amin’ny olo-masiny, amin’ny andavanandro sy amin’ny zavatry ny tany.
« Hamasinina ho an’ny Tompo», izany no soratra tokony ho hita eo amin’izy
ireo. (God’s Amazing Grace, p. 230)
aha ny lehilahy rehetra, na inona na inona andraikitra tanany, no
tsy maintsy voatery hanatsara ny tombontsoa rehetra ananany mba
hahombiazany sy hananany fahendrena, dia amin’ny fanehoany
ny fahaiza-manaony amin’ny fananganana ny fanjakan’Andriamanitra eto
amin’izao tontolo izao no hahatanteraka izany. Satria miaina ao anatin’ny
tantara faran’ity tany ity isika, dia tokony ho malina kokoa amin’ny fomba
fiasa, miambina amim-pitandremana fatratra, mivavaka, ary miasa. Ny asa
fanompoana ara-pivavahana sy ny andraikitra sahanin’ny sampana tsirairay
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 20
dia tokony hitondra ny tombokasen’ny lanitra. «Hamasinina ho an’ny Tompo»,
izany no tokony ho teny filamatry ny mpiasa ao anatin’ny sampana tsirairay
avy. Ny mpandraharaha dia tokony hiezaka hanatratra ny fahatanterahana,
mba ho kristianina môdely, tanteraka ao amin’i Kristy Jesôsy. (Review and
Herald, Oct. 5, 1905)
atria Izy efa niantso anareo ho masina, dia “aoka mba ho masina
koa hianareo amin’ ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe:
«Ho masina hianareo, satria masina Aho» (1 Petera 1:15,16)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 21
ANDRO FAHATELO — ESORY NY KAPANAO
«Esory ny kapanao amin’ ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao io.»
•	Tompo ô, manomboka izao fotoana izao amin’ny fiderana Anao izahay
noho ny toetranao tsy manam-paharoa sy ny maha-Andriamanitra Fitiavana
•	Midera Anao izahay noho ny ohatra nasehon’i Jesôsy, izay nitafy fanetrentena.
•	Midera Anao izahay satria monina «ao amin’ny fitoerana avo sy masina,
miaraka amin’ny torotoro fo sy manetry tena Ianao, mamelombelona ny
fanahin’ny manetry tena ary mamelombelona ny fon’ny torotoro fo.»
Fihaiken-keloka sy Fangatahana Hery Handresena ny Fahotana
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra izay tsy nanananay fo tsotra.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra izay tsy nahafahanay nanaiky
tanteraka ny fahotanay noho ny avonavonay
Fitarainana sy Fanelanelanana
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, ampianaro anay ny hevitry ny hoe «Koa
amin’ izany manetre tena ambanin’ ny tàna-maherin’ Andriamanitra, mba
hanandratany anareo amin’ ny fotoan’ andro.” (1 Petera 5:6).
•	Miangavy Anao izahay, asehoy anay ny fomba hitondranay ny zioganao
sy hianaranay Aminao, satria “malemy fanahy sady tsy miavona am-po”
Ianao. (Matio 11:29).
•	Mangataka Aminao izahay, asehoy anay ireo zavatra eo amin’ny fiainanay,
ka ilànay fianarana ny amin’ny fanetren-tena.
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, aoka hisandratra avy Aminao ireo
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 22
mpitondra fivavahana manetry tena, maneho ny toetran’i Kristy amin’ny
teniny sy ny asany. Ary asehoy anay ny fomba hanohanana ireo mpitarika
anay amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fampaherezana ary ny fanompoana
•	Enga anie ny fiangonanay hanambara amim-pahatokiana tanteraka
ny hafatry ny anjely telo ao amin’ny Apôkalipsy 14. Manomeza anay
fahendrena mba hametraka ny fahamarinan’i Kristy eo amin’ny ivon’ireo
•	Miangavy Anao izahay, tahio ireo ezaka ataonay ho fananganana «foibentoerana manana hery miasa mangina” eny anivon’ireo tanàn-dehibe
manerana izao tontolo izao. Omeo anay ny maso afaka hahita ny tena filàna
fototry ny tanàna tsirairay. Omeo fahaiza-mamorona mba hahafahanay
mahita ireny filàna ireny. Asehoy anay ny fomba hitarihana amim-pitiavana
•	Tompo ô, mangataka Aminao izahay ho an’ny fifohazana sy fanavaozana
eo amin’ny fiainanay manokana, ny ankohonanay, ny fiangonanay ary ny
fiarahamonina misy anay. Atombohy amin’ny fanovàna ny fonay izany
mba hahafahan’ny fahasoavanao mikoriana amin’ny alalanay.
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, omeo saina ny Advantista Mitandrina
ny Andro Fahafito manerana izao tontolo izao mba hanao vavaka mafana,
mihoatra lavitra noho ny tamin’ny lasa rehetra. Manampia anay hiaramitalaho ny ranonorana faran’ny Fanahy Masina. Mangataka Aminao
izahay ny amin’ny Teny fikasana izay voasoratra ao amin’ny Joela 2, Hôsea
6 sy Asan’ny Apôstôly 2.
•	Tompo ô, mivavaka ho an’ireo olona fito (na mihoatra) ao amin’ny lisitra
eto am-pelatananay izahay. Enga anie izy ireny hanana fanetren-tena, ary
hamela ny Fanahy Masina hampianatra azy ireo.
•	Mivavaka ihany koa izahay ho an’ny filàna manokan’ireo izay tafavory eto
•	Tompo ô ! Misaotra ny amin’ity Teny Fikasana ity: “Mitarika ny mpandefitra
amin’ ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny làlany.” (Salamo
•	Misaotra Anao izahay ny amin’i Jesôsy , izay “nanetry tena ka nanaiky
hatramin’ ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ ny hazo fijaliana.”
•	Misaotra Anao satria ny “fanetren-tena no mialoha ny fisandratana”.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 23
ESORY NY KAPANAO
sory ny kapanao amin’ ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao
io” (EKSODOSY 3:5)
ampitandrina an’i Mosesy Andriamanitra mba tsy hanakaiky
amim-pahasahisahiana. Ny fanesorana kapa dia nanondro ny
fahazarana manaja ilaina amin’ny fivavahana marina.
oe-tsaina lalina sy feno fanajana no aoka hoentin’izay rehetra
miseho eo anatrehan’ny Avo Indrindra.” (Patriarka sy
Mpaminany, t. 249.1) “
zontsika atao ny manatona an’Andriamanitra amin’ny
anaran’i Jesôsy amim-pahatokiana, fa tsy amimpahasahisahiana mieboebo, toy ny hoe mitovy saranga Aminy
iny isika. Misy olona miteny amin’Ilay Andriamanitra lehibe sy masina ary
matahotra “Izay mipetraka any amin’ny fahazavana tsy azo atonina” tahaka
ny fiteny amin’ny olona mitovy aminy na ambany noho izy. Ny hafa indray
mitondra tena ao an-tranon’Andriamanitra amin’ny toetra tsy sahiny atao
amin’ny efitrano fandraisana olona an’ny fanjakan’ny tany (…) Izay rehetra
mahatsapa marina tokoa ny fanatrehan’Andriamanitra dia manatona Azy
amin’ny fitsaohana masina ka miankohoka amim-panetren-tena.” (Patriarka
sy Mpaminany, t. 249.1)
y atao hoe mitafy fanetren-tena tsy midika akory fa tokony
ho zenizeny isika eo amin’ny ara-tsaina, hirefarefa eo
amin’ny zavatra kendrena, ary ho kanosa eo amin’ny
fiainantsika, ka mandositra ny hitondra entana sao tsy haintsika ny hitondra
azy amim-pahombiazana. Ny tena fanetren-tena dia manatanteraka ireo
fikasan’Andriamanitra amin’ny fiankinana amin’ny heriny.” (Henoinareo ny
Fanoharana, t. 317)
efa manome fahasoavana bebe kokoa Izy. Koa hoy izy:
«Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona, fa manome
fahasoavana ho an’ ny manetry tena» (Jakôba 4:6)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 24
ndriamanitra dia miasa amin’ny alalan’izay tiany hoentina miasa.
Indraindray Izy dia mifidy izay fiasana ambanimbany indrindra
hanao ny asa lehibe indrindra, satria ny heriny dia aseho amin’ny
alalan’ny fahalemen’ny olona. Manana ny fetrantsika isika, ary izany no
ilazantsika fa lehibe ny zavatra iray ary kely ny hafa; nefa Andriamanitra dia
tsy manombana antsika araka ny lalantsika. Tsy tokony hihevitra isika fa izay
lehibe amintsika dia tsy maintsy ho lehibe amin’Andriamantra, na izay kely
amintsika dia tsy maintsy kely koa Aminy.
anao tsy mendrika ny midoka tena... Ny valisoa dia tsy noho ny asa,
“fandrao hisy hirehareha”, fa noho ny fahasoavana avokoa izany.
sy misy fivavahana ao amin’ny fanomezana voninahitra ny izaho.
Izay manao ny fanandratan-tena ho zava-kendreny dia hahita
ny tenany ho mahantra amin’ny fahasoavana, izay hany afaka
hahatonga azy hahavita eo amin’ny fanompoana an’i Kristy. Na iza na iza no
hampanaranam-po ny avonavona sy ny fanandratan-tena dia simba ny asa…
zay tena kristianina marina eo amin’ny fiainany manokana, eo amin’ny
fampileferany ny tenany isan’andro, eo amin’ny fahatsoran’ny fikasany
sy ny fahadiovan’ny eritreriny, eo amin’ny fahalemem-panahiny raha
misy fiantsiana azy, amin’ny toetra mahatoky amin’ny kely indrindra, eo
amin’ny finoana sy ny fitiavam-bavaka, ny olona izay mampiseho ny toetran’i
Kristy eo amin’ny fiainany ao an-tokantrano, ny olona toy izany no mety ho
sarobidy kokoa eo imason’Andriamanitra noho ny misiônera na ny maritiora
fanta-daza eran-tany (…) (Patriarka sy Mpaminany, p. 355)
oa amin’ izany manetre tena ambanin’ ny tàna-maherin’
Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ ny fotoan’
andro. Ny lanitra dia hiara-miasa amin’ireo izay manatona
an’i Kristy ho amin’ny fiainana mandrakizay, manolotra ny tenan’izy ireo ho
Azy, tahaka izay manolotra ny zava-drehetra ho an’Andriamanitra. Ny zavatra
takin’Andriamanitra amin’ireo mpanompony dia ny hijoroan’izy ireo eo
ambanin’ny faneva tasin-dràn’ny Andriana Emanoela, izay miezaka ny hanaraka
ny fitsipiky ny fahamarinana madio sy tsy misy tsiny. Tsy tokony hiala amin’ny
lalan’ny fandavan-tena sy ny fanetren-tenany izay tsy maintsy hodiavin’ny
tena Kristianina rehetra izy ireo. Rehefa miara-miasa amin’Andriamanitra
izy ireo, dia mitoetra ao anatiny i Kristy, Ilay «fanantenan’ny voninahitra».
Rehefa mitafy ny fahalemem-panahiny sy ny fanetren-tenany izy ireo dia
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 25
hahatsapa fifaliana tsy misy toy izany amin’ny fanaovana ny asa fanompoany.
Izay hambom-pon’ny tany dia niova ho faniriana lalina hanompo ny Tompo.
(Review and Herald, May 11, 1897, par. 14)
laintsika ny manakaiky misimisy kokoa an’Andriamanitra sy mba
hahitantsika fandrao ny fialonana sy ny faharatsiana dia mampanalavitra
antsika amin’ny Mpamonjy. Ny fitiavan-tena sy ny fahatsapana ho
mahavita tena dia manidy ny varavaran ‘ny fo izay mahatonga fanoherana
an’ i Kristyka mahatonga ny tena hiteny hoe: «Tsy tiako ny lalanao fa ny
ahy ihany.” «Manetre tena eo an-tanan’Andriamanitra, dia hanandratra anao
Izy. Ny fiaiken-keloka tsotra sy avy amin’ny fo, vokatry ny hamafisam-po,
ny fitiavana izao tontolo izao, ny fitiavana mirehareha sy ny fahafinaretana,
dia hohenoin’Andriamanitra. Ary ireny fahotana ireny dia hihanjahanja eo
imason’Ilay Andriamanitra Masina. (Testimonies to Southern Africa, p. 78)
y Tompo dia nanendry lehilahy sy vehivay izay azony ampiasaina
amin’ny asany raha manaiky ny hampiasainy araka ny sitrapony
izy ireo. Tsy afaka mampiasa ny olona izay tsy maniry ny hanetry
tena na oviana na oviana Izy. Manetre tena, ranadahy isany. Rehefa manao
izany ianao, dia azon’ny anjely masina atao ny mifampiresaka aminao,
ary mametraka anao eny amin’ny toerana manokana. Amin’izay dia tsy
ho diso fifaliana ny fanandramana iainanao. Katsaho mandrakariva izay
hampifanaraka ny fiainanao amin ‘ny fitarihan’ Andriamanitra, dia ho mora
kokoa aminao ny hanaiky izay hitondran’ny Fanahy Masina anao. (North
Pacific Union Gleaner, March 23, 1910, par. 5)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 26
ANDRO FAHEFATRA — NY AKANJO
“Hifaly dia hifaly amin’ i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’
Andriamanitro; fa notafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjoiny akanjo
fahamarinana.” (ISAIA 61:10)
•	Andriamanitra ô, midera Anao izahay satria Andriamanitra Marina sy
Madio ary Mahery Ianao.
•	Misaotra Tompo ô noho ny fahavononanao hanome anay ny akanjompahamarinan’i Kristy.
•	Midera Anao izahay satria : “Ny asan’ ny fahamarinana ho fiadanana; Ary
ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay.”
Fiaiken-kelona sy Fangatahana hery hoenti-mandresy ny fahotana
•	Mamelà Anay tamin’ny fotoana rehetra izay niakanjoanay ny akanjompahamarinanay fa tsy ny an’i Kristy.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra tsy niankinanay afa-tsy tamin’ny
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, mitariha anay hanaiky ny akanjompahamarinan’i Kristy.
•	Ampio izahay hahatakatra fa «ny fahamarinanay dia toy ny lamba mihosindrà.” (Isaia 64:5).
•	Tompo ô! Manampia anay hahita ny fahamarinanay, araka izay ahitanao
azy. Ampio izahay hahita ny fahamarinanao manokana rehefa hitanay izany.
•	Miangavy Anao izahay, ampianaro anay ny fomba «handosirana ny filan’
ny tanora fanahy; ary hiezaka kosa hitady fahamarinana, finoana, fitiavana,
ary fihavanana.” (2 Timoty 2:22).
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 27
•	Mampianara anay «hahatanteraka ny fahamarinana ilain’ ny lalàna
aminay.” (Rômanina 8:4).
•	Miangavy Anao izahay, ampitomboy ao anatinay ny voan’ny fahamarinana.
•	Miangavy Anao izahay, miarova ny tanoranay amin’ny fakam-panahin’izao
tontolo izao. Atodiho amin’i Jesôsy ny fijeriny.
•	Ray ô! miangavy Anao izahay, mampianara anay hizara ny mofon’ny
fiainana amin’ny hafa. Raha malemy izahay, dia omeo ny herinao. Raha
matahotra izahay, dia omeo ny herim-ponao.
•	Mangataka izahay ny hamerenanao indray ny fifantohana eo aminay
amin’ny fianarana ny bokin’i Daniela, Apôkalipsy, ary ireo faminaniana
hafa. Miangavy Anao izahay, omeo fanantenana miorina tsara ny amin’ny
hoavy ary fahatakarana mazava ny amin’ny ady ifanoheran’i Kristy sy
Satana ny mambran’ny fiangonana.
•	Tompo ô, mampianara anay hianatra ny Teninao ho an’ny tenanay isan’andro.
Aoka ny fanahy masinao ho amin’ireo mambra mba handraisan’izy ireo
anjara misimisy kokoa amin’ny «Minoa ny Mpaminaniny», amin’ny
famakiana ny Baiboly sy ny Fanahin’ny faminaniana, amin’ny mahafiangonana maneran-tany azy.
•	Manampia anay tsy hanao ambanin-javatra sy hikatsaka ny fahendrena
avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra, izay nomena ny fiangonanay
ao amin’ny bokin’ny Fanahin’ny Faminaniana. Maniry izahay ny mba
hahatonga ireny torohevitra ireny ho afaka hitarika anay lalindalina kokoa
amin’ny Teninao, dia ny Baiboly.
•	Tompo ô! Mivavaka ho an’ireo olona fito (na mihoatra), voasoratra ao
amin’ny lisitra eto am-pelatananay izahay. Maniry izahay ny hanovan’ny
Fanahy Masinao ny fo sy ny fisainan’izy ireny.
•	Mivavaka ihany koa izahay ho an’ny filànay manokana izay manatrika izao
•	Tompo ô, misaotra Anao satria ireo rehetra izay maniry ny fahamarinan’i
Kristy dia afaka ny hahazo izany malalaka tokoa.
•	Misaotra Anao izahay noho ny fiainan’i Jesôsy sy ny fahafatesany, izay
manome anay fahafahana handray ny fahamarinanao.
ifaly dia hifaly amin’ i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo
amin’ Andriamanitro; fa notafiany fitafiana famonjena aho,
ary nakanjoiny akanjo fahamarinana.” (ISAIA 61:10)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 28
y akanjo dia mariky ny fahamarinan’i Kristy izay mandrakotra
ny fitanjahantsika rehefa manaiky izany isika.
zay rehetra mitafy ny akanjom-pahamarinan’i Kristy, dia
hitsangana eo anatrehany ho toy ny olom-boafidiny, mahatoky
sady olo-marina. Tsy hanam-pahefana handrombaka azy ireo eo
am-pelatanan’ny Mpamonjy mihitsy i Satana. Tsy hisy na dia fanahy iray
aza izay mitaky ny fiarovany amim-pinoana, no ho lavo eo ambany herin’ny
fahavalo. Manome toky antsika amin’izany ny Tenin’Andriamanitra: “Aoka
hifikitra amin’ny heriko kosa izy, ka hihavana Amiko; eny hihavana Amiko
izy.” (Isaia 27:5). Natao ho antsika ny teny fikasana nomena an’i Josoa hoe
: “Raha mizotra eo amin’ny làlako hianao sy mitandrina ny didiko, (…) dia
homeko làlana ho amin’ireo mitsangana ireo hianao.” (Zakaria 3:7). Dieny
etỳ an-tany, dia ho eo anilantsika ireo anjelin’Andriamanitra.” (Mpaminay
sy Mpanjaka, t. 477)
yNy fahamarinan ‘i Kristy no mahatonga ny mpanota mibebaka
ho azo ekena eo anatrehan’Andriamanitra ary manatanteraka ny
fanamarinana azy. Na dia feno fahotana aza ny fiainany, rehefa
mino an’i Jesôsy ho Mpamonjy ny tenany manokana izy, dia afaka ny hijoro
eo anatrehan’Andriamanitra, mitafy ny akanjom-pahamarinana madio,
mangatsakatsak i Kristy. (Faith and Works, p. 106)
ry mba ho hita eo Aminy aho tsy manana ny fahamarinako,
izay avy amin’ny lalàna, fa izay amin’ny finoana an’i Kristy,
dia ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny finoana.”
y mpanota efa maty noho ny fahadisoana sy ny fahotana dia efa
novelomina indray tamin’ny finoana an’i Kristy. Hitany tamin’ny
finoana fa i Jesôsy no Mpamonjy azy ary velona mandrakizay,
afaka mamonjy «tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alàlany.”
Amin’ny sorom-panavotana nataony ho azy, no ahitan’ny mpino tsara izay
sakany sy lavany ary hahavony sy halalin’ny famonjena, izay novidiny
tamin’ny vidiny tsy manam-petra. Hitany toy ny amin’ny fitaratry ny
voninahitr’Andriamanitra. Hitany ny akanjom-pahamarinan’i Kristy,
koa dia feno fiderana sy fankasitrahana ny fanahiny. Hitany ny akanjompahamarinan’i Kristy, ilay notenomina tany amin’ny fanenoman’ny lanitra,
miasa ho amin’ny fankatoavana ary nisaina ho azy izany amin’ny finoany ny
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 29
ehefa hitan’ny mpanota ny fahatsaran-toetra tsy manam-paharoa
eo amin’i Jesôsy, dia tsy hanintona azy intsony ny fahotana, satria
mijoro ho Lehibe amin’ny alinalina Izy, maha-te ho tia aoka izany.
Tsapany avy tamin’ny fanandramany manokana ny herin’ny filazantsara,
izay maneho fa ny halalin’ny fahendren’ny famoronana dia mitovy amin’ny
hasarobidin’ny zava-kendreny (Faith and Works, pp. 106, 107)
oa raha mbola nitoloko sy nitalaho tamin’ny Andriamaniny
ny vahoakany mba hahazo fahadiovam-po, dia izao no baiko
nomena avy any ambony : “Indro,, efa nesoriko ny helokao,
ary hampiakanjoiko akanjo fihaingoana hianao.” Ny akanjo fotsin’ny
fahamarinan’i Kristy no omena ny zanak’ondrin’Andriamanitra, izay
mitoetra mahatoky mandritra ny fitsapana sy ny fakam-panahy amin’izany
fotoana izany. Ireo olona ao anatin’io “sisa” natao tsinontsinona io, no
nampanaovina ny fitafiana be voninahitra izay tsy voan’ny loton’izao tontolo
izao mandrakizay. Nosoratana ao amin’ny bokin’ny fiainan’ny Zanak’ondry,
anilan’ny an’ireo nahatoky tamin’ny fotoana rehetra, ny anarany. Rehefa
naharesy ny hafetsen’i Satana izy ireo, dia mitoetra tsy nohozongozonina na
dia teo aza ny fieron’ilay dragona. Voaro amin’ilay mpaka fanahy izy ireo
ankehitriny ary ho mandrakizay, fa efa nafindra tamin’ilay niandohan’ny
ratsy ny fahotany” (Mpaminany sy Mpanjaka, p. 480, 481)
sy ampy ny finoana an-kapobeny. Tsy maintsy mitafy ny akanjompahamarinan’i Kristy isika, manao izany ampahibemaso, aminkerim-po, amim-pahavitrihana, maneho an’i Kristy, tsy manantena
na inona na inona avy amin’olona voafetra, fa mibanjina an’i Kristy
mandrakariva ary finaritra ny amin’ny fahatanterahan’ny toetrany. Amin’izay
ny tsirairay avy amintsika dia haneho ny toetran’i Jesôsy ary hampiharihary
fa nahazo famelombelomana avy amin’ny fahamarinana isika, satria izany
dia manamasina ny fanahy sy ny fisainana ho amin’ny fankatoavana an’i
Kristy. (Reflecting Christ, p. 108)
y tena olo-marina, tia sy matahotra an’Andriamanitra, dia mitafy
ny akanjom-pahamarinan’i Kristy na amin’ny soa na amin’ny
ratsy. Ny fandavan-tena, ny fahafoizan-tena, ny fiantrana, ny
fahatsaram-panahy, ny fitiavana, ny faharetana, ny faherezana ary ny
fahatokiana kristianina no tokony ho voa hita isan’andro eo amin’izay
mifandray marina amin’Andriamanitra. Mety tsy hiely maneran-tany ny
asa ataony, kanefa isan’andro izy ireo dia miady amin’ny ratsy ary mahazo
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 30
fandresena miezinezina amin’ny fakam-panahy sy ny faharatsiana. (God’s
Amazing Grace, p. 31)
ry Izy nitondra ny fahotantsika tamin’ ny Tenany teo ambonin’
ny hazo, mba ho faty ny amin’ ny ota isika, fa ho velona ny amin’
ny fahamarinana; ary «ny dian-kapoka Taminy no nahasitranana
anareo» (2 Pet. 2:24).
y tsirairay dia hanana ny adiny manokana hoenti-mandresy ny
fahotana ao am-pony. Indraindray dia asa maharary sy mahakivy
izany, satria, rehefa mahita ny fahadisoana eo amin’ny toetrantsika
isika, dia variana mibanjina azy ireny, raha tokony hibanjina an’i Jesôsy ny
fijerintsika ary handray ny akanjom-pahamarinany isika. Izay rehetra miditra
eo amin’ny vavahady perilan’ny tanànan’Andriamanitra dia hiditra toy
ny mpandresy, ary ny fandresena lehibe dia izay azony avy tamin’ny ady
tamin’ny tenany. (God’s Amazing Grace, p. 31)
amelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin’ ny làlan’
ny fahamarinana noho ny anarany Izy.” (Salamo 23:3)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 31
ANDRO FAHADIMY – NY EFODA
•	Tompo ô! Manomboka izao fotoana izao amin’ny fiderana Anao izahay,
satria Andriamanitra Lehibe, mahari-po ary afaka mamonjy tokoa Ianao.
•	Midera Anao izahay noho ny nitondranao anay tamin’ny fotoan-tsarotra
•	Misaotra Anao izahay satria afaka mitoetra ao amin’ny fiadanana sy ny
•	Tompo ô! Asehoy anay ireo fahotana tokony hibebahanay ampahibemaso
ary ireo izay tokony hibebahanay manokana. Mangataka hery avy Aminao
izahay hoenti-mandresy ireny fahotana ireny.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra niezahanay nitady fandresena
tamin’ny herin’ny tenanay, ka tsy namelanay Anao hitondra anay.
•	Misaotra Tompo ô satria mamela ny helokay Ianao, araka izay hita ao
amin’ny 1 Jaona 1:9.
Vavaka fitalahoana sy fanelanelanana
•	Tompo ô! Mangataka Aminao izahay mba hitarihanao anay fa malemy
•	Enga anie ny Herinao ho tanteraka amin’ny fahalemenay. (1 Kôrintianina 12:9).
•	Ray ô! Miangavy Anao izahay, aza avela halahelo ny fonay. (Jaona 14:1).
•	Manampia anay hitoky amin’ny teny fikasana izay nomenao ao amin’ny
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 32
Isaia 41:10 - fa hampahery anay Ianao, sady hamonjy anay ary hitantana
anay amin’ ny tanana ankavanan’ ny fahamarinanao.
•	Miangavy Anao izahay, tariho ny tanora sy ireo ankohonana ao amin’ny
fiangonanay manoloana ireo fihaikana amin’izao vanim-potoana
•	Asehoy anay ireo olona mijaly manodidina anay. Miangavy Anao izahay,
aoka ianao no hivimbina azy ireny ao anatin’ny olana izay atrehiny.
•	Tompo ô! Asehoy anay ny fomba hametrahanay manontolo ny fiainanay
Aminao. Ampiraiso amin’ny Kristy izahay. Ampiraiso ny fiangonanao ho
amin’ny fitoriana amin’ny feo mafy eto amin’izao tontolo izao.
•	Tompo ô, efa nitahy ny fiangonanao Ianao tamin’ny nanomezanao azy
saina hahatakatra ny fahamarinana ara-Baiboly. Ampio izahay hizara izany
amim-panetren-tena sy amim-pifaliana amin’ny tontolo manodidina anay.
•	Tompo ô! miangavy Anao izahay, mitahia ny ezaky ny tarika madinika
sy ireo trano fiangonana manerana izao tontolo izao. Mangataka Aminao
izahay hanandratra mambra mahatoky misimisy kokoa hatrany, hijoro
ho vavolombelona ny amin’i Jesôsy sy ny toetra maha-te ho tia ananany
amin’ireo mpiray vodirindrina aminay.
•	Tompo ô! Ampianaro anay ny fomba ahafahana mitory mazava tsara ny
foto-pinoan’ny fiangonanay amin’ny fomba mazava tsara, omeo anay ny
fahaiza-mamorona ary ny fahaizana mizara ny tena Fahamarinana araBaiboly. Enga anie ka ny Fitiavan’i Jesôsy no ho ivon’ny zavatra rehetra
•	Tompo ô! mivavaka ho an’ireo olona fito (na mihoatra) manokana,
voarakitra amin’ny lisitra eto am-pelatananay izahay. Ampio izy ireny
hahita izay filàny ary hanokana ny fon’izy ireo amin’ny Fanahy Masina.
•	Mangataka ihany koa izahay ho an’ny filàn’ny tenanay manokana izay
manatrika izao fotoana izao.
•	Andriamanitra ô! Misaotra Anao izahay satria “izay miandry an’ i Jehovah
dia mandroso hery kosa; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery;
hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; handeha izy, nefa tsy ho reraka.”
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 33
•	Misaotra Tompo ô, satria “ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa
izay tia an’ Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo.”
•	Misaotra Anao izahay satria mamaly ny vavakay araka ny sitraponao Ianao.
Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandrapahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo.
Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy
hanafaka.” (ISAIA 46:4)
ahaka ny nitondran’ny mpisoronabe ny efôda teo an-tsorony,
no itondran’ ny Mpisoronabentsika ny enta-mavesatsika,
manome hery antsika manoloana ny fitsapana nahazo antsika
Izy, hahafahantsika mijoro ho vavolombelona ho azy na dia ao anatin’ny
toe-javatra sarotra aza.
iantso antsika Ilay Mpamonjintsika hikambana Aminy,
hampiray ny fahalementsika amin’ny heriny, ny tsy
fahalalantsika amin’ny fahendreny, ny tsy fahamendrehantsika
amin’ny fahamendrehany.” (Hery Mifanandrina, t. 649)
ry apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy
anareo.” (1 Petera 5:7)
isy fanafody ho an’ireo izay manana fo kivy, dia ny
finoana, ny fivavahana, ny asa. Ny finoana sy ny asa dia
manome fahatokiana sy fahafaham-po mitombo isan’andro
isan’andro. Moa alaim-panahy hanaiky hotarihin’ny fanahiana manjombona
na ny fahakiviana va ianao? Eo amin’ny andro maizina indrindra izay
iheverana fa toa manohitra anao izay zava-mitranga dia aza matahotra.
Minoa an’Andriamanitra. Fantany izay ilainao. Mahery indrindra Izy. Ny
fitiavany sy ny fangorahany tsy hita lany dia tsy mety ho tofoka na oviana
na oviana. Aza matahotra fa sao dia tsy mahatanteraka ny feny fikasana
nomeny Izy. Izy no fahamarinana mandrakizay. Tsy hanafoana na oviana
na oviana ny fanekena nifanaovany tamin’ireo izay tia Azy Izy. Homeny ny
mpanompony mahatoky izay ilainy. Hoy ny apôstôly Paoly hoe: “Ampy ho
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 34
anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin’ny fahalemena (…)
Koa dia finaritra Aho amin’ny fahalemena, amin’ny fampahoriana, amin’ny
fahaterena, amin’ny fanenjehana, amin’ny fahantrana noho ny amin’i Kristy,
fa ny fahalemeko no fahatanjahako.”(2 Kôrintianina 12:9,10). (Mpampinany
sy Mpanjaka, t. 132)
avaozina isan’andro ny herin’ireo izay tia sy manompo Azy. Ny
fahatakarany dia hapetraka eo amin’ny asa fanompoana izay
iantsorohan’izy ireo, mba tsy handiso fanantenana amin’ny
fanatanterahana ny tanjon’Ilay naniraka azy. Tsy tokony hisy toerana ho an’ny
fahakiviana eo amin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra. Ny finoantsika
dia tsy maintsy miaritra ny fanerena mihatra aminy. Andriamanitra dia afaka
ary manome malalaka ny rehetra ny hery ilain’ny mpanompony. Hanome
mihoatra noho izay antenain’ireo izay mametraka ny fitokiany Aminy Izy.
Hanome azy ireo ny fahendrena araka ny filàny avy Izy. (Testimonies for the
Church, vol. 8, pp.10, 11)
sy ho vitantsika amin’ny herin’ny tenantsika velively ny hampihatra
ny fivavahan’i Kristy, satria ny fontsika dia mpamitaka mihoatra
noho ny zavatra rehetra. Fa i Jesôsy Kristy, Ilay Mpitsabo ny fanahy,
Ilay afaka mamaky ny fon’ny olona, dia mampiseho antsika ny fomba atao
hanadiovana antsika amin’ny fahotana. «Ampy ho anao ny fahasoavako,»
hoy izy amin’ireo izay nitomany noho ny tsy fahombiazany. «Mankanesa aty
amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho
no hanome anareo fitsaharana.» Ny enta-mavesatra tsirairay dia raisin’Ilay
manolotra ny tanany mba hanarahantsika Azy, mialoha ny hametrahany
izany eo an-tsorony. Ho an’ireo izay miady mafy, alaim-panahy, dia izao
no lazain’i Kristy: “afaka mampahery anao Aho amin’ny andraikitra rehetra
iantsorohanao amin’ ny fiainana kristianina. Mijery an’ i Jesôsy, Tompon’ ny
finoantsika sy Mpanefa azy. Handray fahazavan’ny tavany isika, haneho ny
endriny ary ho lehilahy sy vehivavy hahatratra ny ohatry ny halehiben’ny
fahafenoan’i Kristy. Ny fivavahantsika dia hanintona, satria hanana ny hanitry
ny fahamarinan’i Kristy izany. (Review and Herald, May 4, 1897, par. 11)
ava-dehibe ny fanaovana izay marina sy mahitsy eo
imason’Andriamanitra, ny mampifanaraka ny fanahy amin’ny
Mpahary azy. Ao anivon’ny fielezan’ny ohatry ny ratsy, izay
hisarika ny fanahy hiala amin’ny adidiny noho ny famitahana izay ataony, dia
haniraka ny anjely hamonjy antsika ny lanitra. Saingy raha manaiky ny fakampanahy isika, dia tsy afaka ny handray fanampiana avy amin’Andriamanitra.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 35
Ireo telolahy dia afaka niaritra ny lafaoro mirehitra, satria niara-nandeha
tamin’izy ireo teny afovoan’ny afo i Jesôsy. Raha nandeha tamin’ny herin’ny
tenany tao anaty afo izy ireo, dia ho levona. Ho toy izany koa ny amintsika.
Raha tsy manatona amin-kasahiana ny fakam-panahy isika dia hanampy
antsika Andriamanitra rehefa tonga ny fakam-panahy. (Signs of the Times,
Sept. 2, 1897, par. 11)
anandratra olon-kendry ny Tompo, hametraka ny Fanahiny eo
aminy ary hanomana azy ireo ho amin’ny asa izay tsy maintsy
hotanterahina. Izy tenany, Ilay Andriamanitry ny fahamarinana, no
hanome azy ny fahaiza-manao amin’ny fitoriana ny vaovao mahafaly, ary
izy ho vavolombelony eo amin’ny fiainany. Hijoro ho vavolombelona ho
an’Andriamanitra izy ireo. Tsy hisehoseho tampoka avy amin’ny herin’ny
tenany izy. Ny Fanahy Masin’Andriamanitra no hanosika azy hanolo-tena
hiaro ny fahamarinana. Hanohana azy Andriamanitra. Fantany izay ilainy, ary
isan-taona dia hanomana drafitr’asa ho azy Izy. Tsy hamela ny olona hizotra
araka ny safidim-pony Izy. Raha mbola olombelona ny olombelona dia hiasa
amin’ny alalan’izy ireo Andriamanitra. (Review and Herald, May 25, 1897,
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 36
ANDRO FAHENINA— NY FEHIKIBO
“Fa manamasìna an‘i Kristy ho Tompo ao am-ponareo (Isa. 8:12,13); ary aoka
ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin’ ny
anton’ ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin’ ny fahalemem-panahy sy ny
fanajana.” (1PETERA 3:15)
•	Tompo ô! manomboka izao fotoana izao amin’ny fideràna Anao izahay,
satria Andriamanitra Mpiahy sy Mpiaro Ianao.
•	Misaotra Anao ny amin’ny tombontsoa lehibe nomenao mbola ahafahana
mijoro ho vavolombelonao.
•	Misaotra Anao satria rehefa miantso anay hanompo Anao Ianao dia omenao
anay koa ny hery sy ny fahaiza-manao amin’ny fanatanterahana izany.
Fibebahana sy fangatahana hery hoenti-mandresy ny fahotana
•	Ray ô! miangavy Anao izahay, asehoy anay ireo fahotana tokony
hibebahanay manokana. Mangataka ny herinao izahay hoentinay mandresy
ireny fahotana ireny.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra izay tsy netezanay hanompo Anao.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra izay nandavanay ny hijoro ho
•	Tompo ô, omeo anay ny fo vonona ny hanompo Anao
•	Mampianàra anay mba “hahatonga ny fahazavanao hazava eo imason’ ny
olona, mba hahitan’izy ireo ny asa soa ataonao ka hankalazany ny Rainay
Izay any an-danitra.” (Matio 5:16).
•	Manampia anay hahita ireo tombontsoa omenao anay mba hanompoanay
•	Omeo anay izay teny tokony holazainay mba hahazoanay mijoro ho
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 37
vavolombelona ho Anao rehefa misy ny tombontsoa ahafahanay manao
izany. (Matio 6:24).
•	Aoka ny ankohonanay haneho ny fitiavanao ao an-tokantranonay sy
eo anivon’ny fiaraha-monina misy anay. Mangataka Aminao izahay
mba hitondra filaminana ho an’ny tokantrano maro, hanasitrana ireo
fifandraisana tapaka, hiaro ny marefo amin’ny fanararaotana, ary haneho
ny herinao manamasina amin’ireo izay ao anatin’ny toe-javatra sarotra toa
•	Tompo ô! Mangataka Aminao izahay ho an’ireo mpamaky lay an’arivon’ny
Misiona Advantista, izay manangana fiangonana eo an’ivon’ireo vahoaka
mbola tsy nandray ny hafatry ny Filazantsara. Tsy vitsy amin’izy ireny no
miasa irery na mandalo zava-tsarotra. Koa mangataka Aminao izahay mba
hiarovanao sy hanomezanao fahendrena sy fahombiazana ho azy ireo.
•	Tahio ny ezaka ataon’ireo Advantista maty hanina mpikirakira ny
tambazotran’ny fifandraisana. Omeo azy ireo ny fahendrena avy any
ambony mba hahazoan’izy ireo manao ho mpianatra ireo olona nahita
fianarana sy ireo olona tsongoin’olom-bolo any amin’ireo tanàn-dehibe
•	Mangataka izahay ny hiarovanao ireo mambran’ny Fiangonana izay
miatrika fanenjehana na fandrahonana isan’andro noho ny finoana arapivavahana izay arahiny. Mangataka fahendrena sy risi-po ho azy ireo
amin’ireo lisitra eo am-pelatananay izahay. Ampio izy ireny hanokatra ny
fiainany ho an’ny Fanahy Masinao ary ho tonga vavolombelonao.
•	Mivavaka ihany koa izahay ho an’ny filànay manokana, ho anay izay
•	Misaotra Tompo ô noho ny namolavolanao ny toetranay tamin’ny alalan’ny
asa fanomponay Anao.
•	Misaotra Anao izahay noho ny fifaliana izay tsapanay avy amin’ny fijoroana
ho vavolombelona ho Anao.
•	Misaotra Anao izahay satria efa nomenao ho ohatra ho anay i Kristy ny
amin’ny fomba entina manompo.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 38
a manamasìna an i’ Kristy ho Tompo ao am-ponareo (Isa.
8.12, 13); ary aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly
izay manontany anareo ny amin’ ny anton’ ny fanantenana ao
anatinareo, nefa amin’ ny fahalemem-panahy sy ny fanajana.” (1PETERA
Rehefa mifamatotra eo amin’ny valahan’ny mpisoronabe ny fehikibo dia
midika izany fa efa mihaingo amin’ny fitafiany izy ary vonona ho amin’ny
asa fanompoana. Torak’izany koa ny tsy maintsy haha-vonona antsika
hanompo sy hijoro ho vavolombelona.
y vahoakan’Andriamanitra dia tokony ho vahoaka miavaka,
amin’ny maha-vahoaka manompo Azy amin’ny fahafenoana
tsy mandray ny voninahitra ho an’ny tenany, ary mahatsiaro fa
tamin’ny fanekena miezinezina lehibe no nanekeny hanompo ny Tompo, ary
ny Tompo irery.” (Christian Service, p. 236)
nona no atao hoe manompo an’i Jehôvah ? – Mitovy toetra Aminy,
manahaka Azy. Ny manompo an’Andriamanitra dia mankatò Azy,
mitandrina ny didiny, miaiky heloka ampahibemaso, fa tsy mialokaloka
eo ambanin’ny fanevan’ny fihemorana lehibe, fa eo ambanin’ny faneva
mihosin-dràn’ ny Andriana Imanoela. Ireo izay manompo an’Andriamanitra
dia manao izay azony atao rehetra amin’ny fanarahana ny sitrapony. Izany no
anehoan’izy ireo ny tafika misy azy. (Signs of the Times,Feb. 1, 1899, par. 3)
a manao ahoana na manao ahoana ny asa izay ataontsika, dia
mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra mba “tsy halaina fa
hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo.” “Izay rehetra azon’ny
tànanao atao dia ataovy amin’ny herinao”, “satria fantatrareo, fa ny Tompo
no handraisanareo ny lova ho valiny; fa manompo an’i Kristy hianareo.”
(Rômanina 12:11; Mpitoriteny 9:10; Kôlôsianina 3:24.) (Henoinareo ny
Fanoharana, t. 301)
oka ho vonona mandrakariva hizara amin’ny hafa ny hazavana
izay azonao. Aza misalasala maneho ny foto-kevitrao mahakasika
ny asa, ny faniratsirana. Arangarangao ny lokonao satria natao ho
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 39
fizahan’izao tontolo izao ianao, na anjely, na olona. Aoka tsy hohadinoina
ny andraikitrao. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Bala ianao.
Maniry ny hahita ny zananilahy sy ny zananivavy hijoro amin-kahasahiana
Andriamanitra, mba hahafantaran’izao tontolo izao ny toerana tokony
hahitana azy ireo amin’ny fotoan-tsarotra. (Signs of the Times, Aug. 1, 1900,
y Tompo dia maniry anao ho mpamonjy fanahy. Na izany aza anefa,
tsy afaka ny hanery ny hafa hanaraka ny foto-pinoanao ianao, fa
tsy maintsy vonona kosa hamaly azy ireo ny amin’ny fanantenana
ao anatinao, amin’ny fahalemem-panahy sy ny fahatahorana. (1 Petera 3:15).
Nahoana no tokony hatahotra? - Aza matahotra fa ny teninao dia tokony ho
teny tsotra, tsy lava, nefa mahafaoka izay tokony hambaranao, fandrao hisy
teny tsy voafaritra, fandrao ny fitenenana tsy hanahaka ny fomban’i Kristy.
Aoka hifamatotra tanteraka amin’i Kristy ary aoka ny fahamarinana haseho
tahaka ny ao Aminy. (Manual for Canvassers, p. 34)
oka hazava eo imason’ ny olona toy izany koa ny
fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka
hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra.” (Matio 5:16)
rin’Andriamanitra ny hahatonga ny mpino tsirairay ho tonga mpahazo
fanahy, dia homba sy hitahy ireo izay mikatsaka fahendrena sy fitarihana
avy Aminy Izy Rehefa mandeha amim-pitandremana, am-pahendrena,
ary mitoetra marina ao amin’ny Tompo Andriamanitr’i Isiraely izy ireo, dia
haseho eo amin’ny fomba fiainany ny fahadiovana sy ny fahatsoran’i Kristy;
hijoro ho vavolombelon’ny toe-panahy marina araka an’Andriamanitra
izy. Amin’ny zavatra rehetra lazainy sy ataony, dia hanome voninahitra ny
anaran’Ilay tompoiny izy ireo.
y mpino izay manana ny toe-tsaina misiônera marina dia epistily
velona, fantatra ary fizahan’ny olon- drehetra. Ny fahamarinana
dia mivoaka amin’ny fahafenoany eo amin’ny molony, fa tsy misy
teny diso. Ny fitiavam-bavaka sy ny zotom-po ary fahaiza-mandanjalanja dia
hitombo miaraka amin’ny fotoana. Ho hitan’ny tontolo jentilisa fa manana
firaisana velona amin’Andriamanitra tokoa izy, ka mianatra Aminy izy ireo.
Ny teny mivoaka ny molotr’izay miova fo dia misy hery manohina ny fo
mangatsiaky ny tsy mpino, satria na ireo izay tsy mahalala an’Andriamanitra
aza dia afaka manavaka ny olombelona sy ny fanahy.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 40
anadahy sy rahavavy malala, moa tsapanao ao am-ponao sy eo
amin’ny toetranao ary ny fiainanao va ny hery manamasin’ny
fahamarinana masina? Moa va azonao antoka fa Andriamanitra,
noho ny Zanaka malalany, dia namela ny fahotanao? Moa va ianao efa
manao izay azonao atao rehetra mba hahafahanao miaina madio, tsy manao
izay ratsy eo imason’Andriamanitra sy ny olombelona? Efa mba nitalaho
tamin’Andriamanitra ve ianao ho an’ireo namanao sy ireo mpiray vodirindrina
aminao? Raha vita fihavanana tamin’Andriamanitra ianao ary nametraka ny
momba anao rehetra eto amin’ny alitara masina, dia ho azonao atao ny miasa
malalaka ho amin’ny asa famonjena fanahy. (Manuscript Releases, vol. 8, pp.
oka ny fitenintsika ho feno fahalemem-panahy rehefa mikatsaka
ny hahazo fanahy isika. Andriamanitra dia fahendrena ho an’izay
mitady fahendrena avy amin’ny loharano masina. Tsy maintsy
mikatsaka ny tombontsoa araka izay fahafahantsika isika. Tsy maintsy
miambina amin’ny alalan’ny vavaka ary vonona ny hamaly ireo rehetra izay
manontany ny amin’ny anton’ny fanantenana izay ao anatintsika. Fandrao,
tsy manaitra araka ny tokony ho izy ny fanahy izay nahafatesan’i Kristy isika,
ka noho izany dia tokony hiazona ny fontsika hanandratra an’Andriamanitra
mandrakariva isika, mba hahafahantsika miteny amin’ny fotoana mampety
izany. Ny Fanahy Masina dia hampihatra ny fahamarinana izay nambara
tamim-pitiavana. Ny fahamarinana dia hanana hery hamelombelona ny fanahy
rehefa miteny araka ny fitarihan’ny fahasoavan’i Kristy. (The Publishing
Ministry, p. 307)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 41
ANDRO FAHAFITO — NY FIAROVAN-TRATRA
“Ary mananatra anareo aho, ry rahalahy, amin’ ny anaran’ i Jesosy Kristy
Tompontsika, mba hiray teny hianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo
aminareo, fa mba ho tafakambana tsara hianareo hiray saina sy hevitra.”
(1 KORINTIANINA 1:10)
•	Tompo ô! Midera Anao Izahay, satria Andriamanitra Fitiavana,
Andriamanitry ny fiadanana, ary Andriamanitry ny firaisan-tsaina Ianao.
•	Midera Anao izahay noho ny ohatry ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina
izay nisy teo anivon’ireo mpianatra taorian’ny Pentekôsta.
•	Misaotra Anao satria afaka mitondra fampiraisana eo anivon’ny Fiangonana
sy ny ankohonana Ianao.
hibebahanay ampahibemaso, sy ireo izay tokony hibebahanay manokana.
Mangataka ny Hery avy Aminao izahay hoentinay mandresy ireny fahotana
•	Miangavy Anao izahay, mamelà ny helokay tamin’ny fotoana rehetra
nampielezanay ny fisaratsarahana tamin’ny alalan’ny teny sy ny asa, teo
anivon’ny vatan’i Kristy.
•	Misaotra Anao satria mamela heloka Ianao, araka izay hita ao amin’ny
•	Tompo ô! Mitariha ny vahoakanao “ho amin’ ny firaisan’ ny finoana
sy ny fahalalana tsara ny Zanak’ Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe,
mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy.” (Efesianina
•	Manampia anay tsy hanao na inona na inona “amin’ ny fifampiandaniana,
na mandrani-tena foana fa amin’ ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny
namany ho mihoatra noho ny tenany.” (Filipianina 2:3).
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 42
•	Tompo ô, miangavy Anao izahay, omeo anay ny fo feno fahalemempanahy sy fitiavana ho an’ireo olona manana olana amin’ny firaisa-monina
•	Tompo ô, asehoy amin’ny tsirairay aminay, raha toa ka vato misakana ny
firaisan-kina ao amin’ny fiangonanay na ny fifandraisana ao anatin’ny
ankohonanay izahay. Miangavy Anao izahay, torotoroy ny fonay ary aoka
Ianao hitondra firaisan-tsaina araka ny drafitrao.
•	Mivavaka ho an’ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina eo anivon’ireo
mpitondra ny fiangonanay sy ny fiangonana maneran-tany izahay.
•	Enga anie ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito maneran-tany mba
samy hahatakatra avokoa ny vinan’ny Mambra Rehetra Mandray Anjara.
Ampio ny tsirairay avy aminay haneho faherezana amin’ny fijoroana ho
vavolombelona ataon’ny tena manokana, amin’ny asa fanatrarana ny any
ivelany izay ataon’ny tarika madinika, na amin’ny asa fitoriana atao eny
•	Miangavy Anao izahay, iraho ny Fanahy Masinao hanomana ny fon’ireo
mpihaino sy mpanaraka ny Radio Advantista Maneran-tany, indrindra ireo
izay monina eny amin’ny faritry ny tanàn-dehibe maneran-tany. Ampio ny
Fiangonana hijoro ho mahatoky amin’ny fanarahana sy fampianarana ireo
izay mitady Anao.
•	Tahio ny fiaraha-miasan’ireo fikambanana sy sampana maro samy hafa
amin’ny fanatanterahana ity asa fitoriana mankadiry ity. Tahio ireo
mpanomponao mba hiara-miasa amim-pitiavana - ho an’ny tsirairay avy
ary ho Anao.
•	Tompo ô! Miangavy Anao izahay, asehoy anay ny fomba ahafahana
manaparitaka misimisy kokoa ny asa soratra mirakitra ny Fahamarinana
(sora-pirinty sy elektrônika) eny anivon’ny fiaraha-monina misy anay.
Enga anie ka hihamaro ireo asasoratra momba ny Filazantsara, ny
mpianatra mpilatsaka an-tsitrapo, ny mpanoratra, ireo manam-pahaizana
manokana momba ny asa fanaovan-gazety, ary ireo mpanohana ara-bola
mba hahafahana mampiely ny Tenin’ny Fanantenana sy Fiainana.
•	Tompo ô! Mivavaka ho an’ireo olona fito (na mihoatra) ao amin’ny lisitra
manokana eto am-pelatananay izahay. Enga anie ny Fanahy Masinao hiaramiasa amin’izy ireny eo amin’ny fiainany.
•	Mivavaka ihany koa ho an’ny filàna manokan’ireo izay manatrika izao
fotoana izao izahay.
•	Misaotra Anao izahay Tompo ô, noho ny amin’ny Jesôsy izay mivavaka ho
an’ny firaisanay, araka ny voalaza ao amin’ny Jaona 17.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 43
•	Misaotra Anao satria ny firaisana eo anivon’ny Fiangonana dia manampy
izao tontolo izao hino fa i Jesôsy no Zanak’Andriamanitra (Jaona 17:21).
ry mananatra anareo aho, ry rahalahy, amin’ ny anaran’ i
Jesosy Kristy Tompontsika, mba hiray teny hianareo rehetra,
ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana
tsara hianareo hiray saina sy hevitra.” (1 KORINTIANINA 1:10)
y vato 12 izay maneho ireo foko 12 teo amin’ny firenen’i
Isiraely dia voatahiry eo amin’ny fiarovan-tratra mifanandrify
amin’ny fon’ny Mpisoronabe. Avy amin’io no ahafantarantsika
ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasantsika, ny firaisana ao amin’ny
fitiavan’i Kristy, ary ny fanehoana izany fitiavana izany amin’ireo olona
ao anatiny sy ivelan’ny fiangonana.
y tsiambaratelon’ny fahombiazantsika amin’ny fanatanterahana ny
asan’ Andriamanitra dia ho hita ao amin’ny fiaraha-miasa mirindra
amin’ny vahoaka. Izany dia mitaky fifantohana feno. Ny mambra
tsirairay ao amin’ny vatan’i Kristy dia tsy maintsy miasa ho an’Andriamanitra,
araka ny fahafahana nomena azy. Tsy maintsy mifanohana isika, manohitra
ny faneriterena sy fahasarotana – soroka miara-milanja ary tongotra miaramamindra.
aha ny kristianina no miara-mientana, miara-mandroso, eo
ambanin’ny fitarihan’ny Hery iray, ho fanatanterahana tanjona iray
dia ho azony atao ny hanozongozona izao tontolo izao. (Christian
sy misy asa ambony noho ny asan’ny mpampiely boky, satria izany
dia mitaky ny fanatanterahana adidy ara-môraly avo lenta tokoa.
Ireo izay mandray anjara amin’io asa io dia mila ny fitarihan’ny
Fanahin’Andriamanitra. Tsy tokony hisy toerana ho an’ny fanandratan-tena.
Inona tamin’izay ananantsika no tsy noraisintsika tamin’i Kristy? Tokony
ho tia ny rahalahintsika isika, maneho ny fitiavantsika amin’ny alalan’ny
fifanomezan-tanana. Tsy maintsy manana fangorahana sy mahalala fomba
isika; tsy maintsy miara-mientana, toy ny misintona mahazaka iray. Ireo izay
miaina ny fiainam-bavak’i Kristy ihany, ary mampihatra izany eo amin’ny
fiainany andavanandro no hahajoro manoloana ny fitsapana izay mamely izao
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 44
tontolo izao. Ireo izay manandratra ny tenany dia mitoetra eo amin’ny herin’i
Satana, miomana handray fahadisoam-panantenana. Ny tenin’ny Tompo ho
an’ny vahoakany dia manandratra fitsipi-piainana ambony dia ambony. Hiaramiasa amintsika Izy, raha mankatò ny feony isika, ary ho fahombiazana ny
ezaka rehetra ataontsika. Tsy maintsy handray fitahiana avy amin’ny asantsika
isika, ary hanangona harena eo anilan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra.
(The Colporteur Evangelist,p. 25)
ia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray
fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na
inona amin’ ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana, fa
amin’ ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny
tenany.” (Filipianina 2:2, 3)
e loatra ny fisaratsarahan-tsaina eo anivon’ireo mpitondra hafatra.
Tsy maintsy esorina izany, ary tokony hisy ny fampiraisana ny
mpanompon’Andriamanitra. Be loatra ny toe-tsaina manao hoe:
“Moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?” “Hoy ny navalin’ilay anjely, «Eny,
mpitandrina ny rahalahinao ianao. Tokony hikarakara azy ianao, hikatsaka
izay mahasoa azy, haneho fitiavana sy toetra maha-te ho tia aminy. Miaramientana! Miara-mientana!” Noforonin’Andriamanitra mba hanana fo tsotra,
mahatoky, tsy mihatsarivelatsihy, feno fahalemem-panahy, sy fanetren-tena
ny olombelona. Izany no fitsipiky ny lanitra; izany no Didin’Andriamanitra.
(Gospel Workers , p. 259)
e loatra ny fangatsiahana sy ny tsy firaihana - be loatra ny toe-tsaina
«tsy miraharaha» - izay eo amin’ireo milaza ho mpanaraka an’i
Kristy. Tokony ho samy hihevitra ny hafa ny rehetra, ary ho saropiaro ny amin’ny tombontsoan’ny tsirairay. «Aoka hifankatia”. Ankoatra
izany dia tokony hanangana manda mafy orina hanoherana ireo fitaovana
ampiasain’i Satana. Eo anivon’ny fanoherana sy ny fanenjehana dia tsy
tokony hikambana amin’ny mpikomy isika, tsy hiray amin’ireo mpanara-dia
ilay mpikomy lehibe, izay tsy mikatsaka afa-tsy ny hiampanga ireo rahalahy,
hanala baraka ary handoto azy ireny.
sy maintsy handalo fitsapana ny vahoaka sisa amin’ity taona
ity, hamotika ny fototry ny fangidiana rehetra, handevina azy
ireny miaraka amin’ny taona lasa. Atombohy amin’ny fomba
fijery malefaka kokoa, fitiavana lalindalina kokoa ho an’ny mambra sy ny
ankohonan’ny Tompo isanisany avy ny taona vaovao. Miara- mientana!
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 45
«Miray, miara-mijoro; ho lavo ny mandan’ny fisaratsarahana.” «Miakara
ambony, ambonimbony kokoa, mihoatra noho izay efa nisy anao hatrizay.”
(Our High Calling, p. 370)
aha voataonan’i Satana ho amin’ny fifampitsikerana ireo izay
milaza fa vahoakan’Andriamanitra, dia hiparitaka toy ny fielin’ny
masirasira izany. Aza omena toerana mihitsy ny toe-tsaina
mpitsikera, fa izany no siansan’i Satana. Ny fanekena izany dia mahatonga
ny fitsiriritana, ny fialonana ary ny ratsy hihanaka amin’ny rehetra.
iara-mientana! Izany no baiko henoko avy tamin’Ilay Kapitenin’ny
Famonjena antsika. Na aiza na iza misy firaisana dia misy hery.
Izay rehetra misafidy ny hiaraka amin’ny Tompo dia tsy maintsy
miara-mientana. Ilaina ny firaisana sy ny fitiavana madio eo anivon’ny
mpino ao amin’ny fahamarinana. Ary na inona na inona mitarika ho amin’ny
fisarahana dia avy amin’ny devoly. Noforonin’Andriamanitra ho iray ao
Aminy, toy ny sampana iray amin’ny voaloboka ny vahoakany. Amin’izay
dia ho iray ihany izy rehetra. (Selected Messages, book 3, pp. 351, 352)
sy maintsy manao ny ezaka isika hamaliana ny vavaka izay nataon’i
Kristy manao hoe: “Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao
Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao.” Firaisaina manao ahoana
loatra re izany!. Ary hoy Izy: “Izany no hahafantaran’ ny olona rehetra fa
mpianatro hianareo, raha mifankatia.” (Testimonies for the Church, vol. 5,
pp. 488, 489)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 46
ANDRO FAHAVALO — ORIMA SY TOMIMA
“Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny
adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao
fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo
izay sitrapon’ ny Tompo.” (EFESIANINA 5:15-17)
•	Tompo ô! Midera Anao izahay satria Ianao no Mpitarika anay sy Sakaizanay.
•	Misaotra Anao izahay satria nahariharin’ny Baiboly taminay ny sitraponao.
•	Midera Anao izahay noho ny nanirahanao an’i Jesôsy, haneho ny sitrapon’
•	Tompo ô! Miangavy Anao izahay, asehoy anay ireo fahotana tokony
hibebahanay manokana. Mangataka Hery avy Aminao izahay hoentinay
mandresy ireny fahotana ireny.
•	Mamelà anay tamin’ny fotoana rehetra izay tsy nanekenay hanaraka ny
sitraponao araka izay voarakitra ao amin’ny Teninao.
•	Misaotra Anao satria mamela anay Ianao, araka izay voasoratra ao amin’ny 1
Fangatahana sy vavaka fanelanelanana
•	Tompo ô! manampia anay hahatsiaro ireo planinao, izay “ hevitra hahatonga
fiadanana fa tsy loza”, mba hanome anay fanantenana ny amin’ ny farany.
•	Mangataka Aminao izahay, ny hanomezanao anay fo tia manao ny sitraponao
fa tsy ny anay.
•	Enga anie ny tsirairay avy aminay hanaraka ny ohatr’i Jesôsy, izay tonga tsy
hanao ny sitrapony fa ny hanao ny sitrapon’ny Rainy. (Jaona 6:38).
•	Tompo ô! Omeo fahendrena izahay rehefa mikatsaka ny sitraponao amin’ny
toe-javatra manokana. Enga anie izahay hitady mandrakariva Anao ary hankatò
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 47
•	Mivavaka izahay ho an’ny tanoranao mba hahafahan’izy ireny mahatakatra
ny sitraponao manoloana ny fisafidianana izay ho namana hiara-dalana eo
•	Tompo ô! Mitariha anay ary asehoy amin’ireo izay voafidy ho mpitarika ny
fiangonana ny sitraponao.
•	Mangataka Aminao izahay, enga anie ka hiroborobo ny fampielezana ny taridalana fianarana Baiboly, ireo trakta ary ireo boky toy ny: Tena Fahasambarana.
Enga anie ireny fitaovana ireny hamboly ny voan’ny fahamarinana ao ampon’ny vahoaka ary tariho izy ireo hianatra ny Tenin’Andriamanitra.
•	Enga anie ireo mambran’ny fiangonanay, ireo Pasitora, ary ireo mpitarika
manerana izao tontolo izao hivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra isan’andro.
Manampia ihany koa anay hikatsaka Anao isan’andro amin’ny vavaka
manokana. Ampahatsiaivo anay fa tsy mahavita na inona na inona izahay raha
•	Tompo ô! Ampio izahay ho vonona hanaraka Anao amin’ny tsipiriany
madinika indrindra amin’ny fiainanay. Amin’ny dingana manaraka tokony
hataonay hirosoana amin’ny fankatoavana, dia miangavy anao izahay, asehoy
•	Miangavy Anao izahay, aoka hovelominao indray ny fanatrehana ny Sekoly
Sabata manerana izao tontolo izao. Tariho ny mambra sy ny vahiny hanao ny
fanandraman’ny tena firahalahiana marina, ny iraka, ny fianarana Baiboly ary
ny asa fitoriana eo an-toerana.
•	Tompo ô! mivavaka ihany koa izahay ho an’ireo olona fito (na mihoatra)
ato amin’ny lisitra eto am-pelatananay. Ny Fanahy Masinao anie haneho ny
sitraponao amin’izy ireny.
•	Tompo ô! Misaotra satria vonona ny haneho ny sitraponao aminay Ianao.
•	Misaotra satria rehefa matoky Anao amin’ny fonay rehetra izahay, fa tsy
amin’ny fahalalanay manokana, ary manaiky Anao amin’ny lalanay rehetra,
dia hitarika ny dianay Ianao. (Ohabolana 3:5,6).
•	Misaotra Jesôsy ô, satria ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. (Jaona
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 48
ORIMA SY TOMIMA
oa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo
tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny
andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho
izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ ny Tompo.”
Ny Orima sy Tomima dia napetraka teo an-tsoroky ny mpisoronabe ary
naneho ny sitrapon’Andriamanitra tamin’ny vahoakany. Zava-dehibe ho
antsika ny mahatakatra ny asan’i Kristy ho antsika, sy ny sitrapony ho
an’ny fiainantsika amin’izao fotoana izao.
amy manana fanahy hovonjena na avela ho very ny tsirairay.
Samy manan-draharaha hodinihina eo anatrehan’ny
fitsaran’Andriamanitra ny tsirairay. Samy tsy maintsy hifanatritava amin’Ilay Mpitsara Lehibe ny tsirairay. Noho izany, dia zava-dehibe manao
ahoana loatra ny handinihan’ny tsirairay ireo toe-javatra manetriketrika ireo
rehefa hipetraka ny Mpitsara ka hosokafana ny boky, ary tsy maintsy hitsangana
ho amin’ny anjarany avy ny tsirairay, miaraka amin’i Daniela amin’ny andro
farany.” (Hery Mifanandrina, t. 504)
a kely na lehibe ny andraikitra sahanina amin’ny fiainana dia izao
mandrakariva no fanontaniana voalohany tokony hipetraka : «Inona
no sitrapon’Andriamanitra?» “Tsara lavitra noho ny sorona ny
fankatoavana, toraka izany koa ny fihainoana noho ny tavin’ny ondrilahy.»
Niantso ireo zanany i Kristy mba hialan’izy ireo amin’ny fitiavan-tena, ny
fitsiriritana ary ny fahalotoana rehetra. «Mankanesa aty Amiko,» hoy Izy, «fa Izaho
hanome anareo fitsaharana.» Mianara Amiko. Ampiraiso amin’ny sitrapoko ny
sitraponareo, ary ny làlanareo amin’ny lalako. Ampiraiso amin’ny fiainako ny
fiainanareo. Dia hahazo harena izay haharitra mandrakizay ianareo. (Signs of the
Times,Feb. 19, 1902, par. 13)
nona no sitrapon’Andriamanitra? Inona no tokony hataoko mba hanomezako
voninahitra an’Andriamanitra? Nanolo-tena hanompo ny Mpamonjy
aho amin’ny fitiavana tsy mizarazara. Noheveriko ho toy ny “fakofako
ny zava-drehetra” mba hahafahako mahazo an’i Kristy. Ny lanitra, ny fiainana
mandrakizay no zava-dehibe amiko, ary maty ho ahy i Kristy mba handraisako
ny “voninahitra mavesatra mandrakizay”… (That I May Know Him, p. 203)
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 49
y ezaka rehetra natao mba hanalavirana ny herin’ny fahazarandratsy dia mitomban-dahy. Amin’ny alalan’ny fiezahana hentitra
dia ny sitrapon’Andriamanitra no tokony hasandratra ambonin’ny
fahamendrehan’ny fiainana madio. Ny hery ara-panahy sy ara-môraly dia raisina
avy amin’ny fampiasana ny fahaizana izay nomen’Andriamanitra antsika. Misy
fifaliana eo anatrehan’ny anjely any an-danitra rehefa mahazo fandresena amin’ny
anaran’i Jesôsy ny tanora. (TheYouth’s Instructor,Nov. 12, 1896, par. 6)
a izao no sitrapon’Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo. Moa
va tsy izany indrindra no fanirianao? Mety ho toy ny tendrombohitra
miavovona eo anatrehanao ny fahotana, ka mampietry ny fonao
ianao, ary miaiky ny fahadisoanao, ka mametraka ny fitokisanao amin’ny
fahamendrehan’ny Mpamonjy voahombo sy nitsangana indray, dia hanome anao
famelan-keloka Andriamanitra, hanadio anao ho afaka amin’ny faharatsianao
rehetra. Ny angatahiny dia ny hankatoavanao tanteraka ny didiny. Izao teny izao
no ambarany aminao mivantana amin’ny vavany : “Aoka ho masina hianao,
hihamasina hatrany hatrany.” Katsaho ny fahafenoan’ny fahasoavan’i Kristy.
Aoka haniry mafy tokoa ny fahamarinany ny fontsika, satria avy amin’izany no
ahazoantsika fiadanana mandrakizay. (Vavolombelona Mahery, t. 301)
oa raha misy olona ao amin’ i Kristy, dia olom-baovao izy;
efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo.” (2
isy fepetra maromaro natao mba hahatonga ny vahoakan’
Andriamanitra hahatratra ny fahalavorariana amin’ny toetra.
Hoy ny apôstôly hoe: «Izao no sitrapon’Andriamanitra, dia ny
hanamasinana anareo.» Tsy maintsy manovo avy eo amin’ny loharanompahalalana sy hery rehetra tsy mety ritra ny tsirairay, mba hahafahany manao
ny asan’ny fahamarinana. Amin’ny alalan’ny hazo fijalian’i Kalvary, ny toerana
rehetra dia omena mba hahafahan’ny olombelona ho tafaray amin’ny mpiarabelona aminy, ary mifanaraka amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra. Ny Ray dia
milaza fa ho tia ireo izay mino fa maty ho azy ireo i Kristy, tahaka ny nitiavany ny
Zanany lahitokana. Ny hazo fijalian’i Kristy no antoka fa mety ho tanteraka Aminy
isika. Tia an’izao tontolo izao Andriamanitra, ka “nomeny ny Zanany lahitokana
mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.» Ao
amin’i Kristy, ny hatsaran-toetra; ao amin’ny Kristy ny fahatsarana ara-tsaina sy
ny fahombiazan’ny fitondran-tena.
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 50
10 ANDRO 2018.pdf (PDF, 526 Ko)
tompo izany izahay fanahy tokony kristy bavaka andro janoary tamin fiaraha masina andriamanitra mivavaka rehetra
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00567672.